Une mudziyo weAroid, kungave nekuti iwe wanga usingade, kana kutadza kubhadhara, iPhone - uye mumakore apfuura izvo zvaireva kuti waifanira kurarama nemaitiro epazasi. Nekufara, mazuva iwayo apera uye zvechokwadi apera, aine marongero madiki madiki emapurogiramu akamira kuti zvigunwe zvigunwe neApple's Apple Store inofanirwa kupa.
Chii icho best phone ye2017?
Sezvinobvumwa, huwandu hukuru hwemaapuro hahureve kuti iwo ese akanaka - kure nazvo muchokwadi, uye kuwana iwo akanaka kunogona kuva kwakaoma.
Pane zvishandiso uye matekiniki ekubatsira, nerondedzero dzakasiyana-siyana mu Play Store Inokupa iwe Mharidzo dzePikitsi pane mhando dzese, kuburitswa nyowani uye kunyangwe maapplication ayo akakurudzirwa chaizvo iwe zvichibva pane zvawakatanga kuisa
Iwe unogonawo kutsvaga zvibvumirano zvakafanana nekunakidzwa kwako nekutsvaga purogiramu yaunayo nekuona chimwe chinhu chinouya.
Uye kutarisa kwevashanduri zviongorudzo uye kuongororwa kunogona kukuchengetedza kubva pakudhadharira dud ye-app.
Asi kunyange nezvose izvozvo, nhamba yakawanda yezvibvumirano paGoogle zvinoreva kuti zvizhinji zvekanakisisa zvinowanzorasikirwa, asi dzimwe nguva dzisina simba dzinokwira kumusoro.
Saka kuti uve nechokwadi chekuti hautomboisa duff app apa pane kwedu kusarudza kwakanyanya kwaunofanirwa kuisa izvozvi - yega yega yakanyatsosarudzwa kuve nechokwadi chekuti iwe unenge uine yese suite yekunakidzwa, kuita uye, kusveta, zvinoshanda zvirongwa pafoni yako kana piritsi. .
Iva itsva vhiki ino: Adapticons
Pane zvakawanda zvezviratidzo zvepikicha zvinowanikwa kuti zvikubatsire kuchinja mapikicha ako e-app, asi zvakadini kana iwe uchida kunyanya kudzora, kana uchingoti tauak pane kutora mufananidzo? Ndiko Adapticons inouya.
Iyo app inoita kuti ugadzire kana kuchinjisa mifananidzo yako wega, kutanga wotanga chiratidzo icho chaunoda kugadzirisa, wozosarudza kubva mumhando dzakasiyana-siyana uye mavara, uchichinja kukura uye kutenderera uye uchisarudzawo kuchinjisa rugwaro rwakaratidzwa pasi paro - runogona kunge rwuri nyore kana semuenzaniso iwe unoziva app nezita rakasiyana pane rakanyorwa so.
Kunyange zvazvo iwe unogona kuwana Adapticons pasina, iwe ungada kubuda kunze kwe $ $ 0.99 / £ 0.99 IAP kana uchida kugadzira mifananidzo yakawanda, sezvo izvi zvinosunungura mitoro yakawanda, inokutumira kuisa zviratidzo kubva pane yako girazi, rinobvisa mvumo uye kukubvumira kuti uite zvinodarika imwechete kamwechete panguva.
Kana uri kutsvaga kukurudzira kubuda uye kufamba zvakawanda ipapo Kuvhima Kwegwagwa zvinogona kuva chinhu chaicho. Sarudza kure kubva kunzvimbo yako uye ipapo kuendesa kumigwagwa kuchakupa chinangwa chokusvika ichocho chiri kure.
Izvozvo zvinoreva kuti hazviudze iwe kero kana mazano, zvinongokupa mufananidzo weGoogle Street View.
Kubva ipapo unofanirwa kuishanda kubva pamufananidzo kana kungotanga kufamba, panguva iyo Street Hunt ichakuudza kana uri kuswedera pedyo kana kupfuura.
Iwe unogona kuona mauri kure iwe uri kure nekuenda kwaunoshandisa uchishandisa chiratidzo pane lock yako, naizvozvo haufaniri kuramba uchivhura purogiramu, uye iwe unogonawo kuwana nguva nenguva vibration cues - nekutinhira kumwe chete kukuudza iwe uri kuswedera pedyo, asi zvese zvinoreva kuti uri kutamira mberi kubva pane chinangwa chako.
Kuzadzisa kusaka kunokuwana iwe mapikicha, uye mapurisa anotungamirira kuti kukwikwidzana pakati penyu kuenzanise zvikamu zvavo neshamwari kana pasi rose.
Iyo pfungwa inofadza, inopedzererwa zvishoma nezvishoma nekuti iyo nzvimbo inosarudzwa inosarudzwa yakananga yakatarisa kure, uye sezvo zvingasava nyore nguva dzose kutaridzika nyore, asi vanokurudzira vanoti vari kushanda pakusarudza kunzvimbo yekuenda.
Kungofanana neshanduro ye digital yechirongwa chekare, Travellite inokubvumira kuti uudze iyo purogiramu yaunenge uchienda kune imwe nyika wozoiona ichinyatsoratidzwa pamepu yenyika.
Kune zviyero zvekuenda nazvo, kutaura kuti zviyero zveiite rega rega uye nyika yese sewe wakaenda kune, uye kune bhuku rekunyora, kuitira kuti iwe unogona kutumira zvidzidzo zvako nemashoko, zuva uye zvingasarudzika mufananidzo.
Chikamu ichocho hachina kunzwa sechinyatsoratidzwa sezvimwe zvimwe zvemazuva mapurogiramu, asi kune chimwe chinhu chinonakidza pamusoro pekuona mapuraneti anoramba ari kukura wezvawakave, uye purogiramu iri nyore kushandisa, tichikuona iwe rurefu rukuru nyika uye tongobata izvo zvawave uchienda.
Hazvina mari yakawanda kune iyo, asi nokuda kweRatvellite yakachena inofanirwa kutarisa munhu wese anoona zvakawanda zvenyika, kana kuti anoda kuona zvimwe.
Chimwe nguva chekuvharidza nguva yekuvharidza hazvifananidzi mamiriro ezvinhu ose. Semuenzaniso, kana uri kuverenga imwe nyaya iwe unogona kutora nguva refu kwenguva refu, saka haufaniri kuramba uchingobata chinyorwa kuti urege kumira.
Asi kutora nguva nguva inowanzovanzwa mukati memaminitsi mashomanana e-screen settings, saka kugara uchishandura nguva iyo inogona kunge yakangoita fiddly.
Kwete ne zvine caffeine kunyange zvakadaro. Iyi purogiramu inowedzera kukurumidza zvirongwa tile kuzaziso dzako kudhonza-pasi, izvo iwe unogona kutora kuti uchinje nguva yekufamba kwenguva. Imwe pompini ichaiisa kumaminitsi e5, yechipiri ku10, pombi yechitatu inoita nguva yekuzorora 30, chechina inodzivisa screentime timeout zvachose uye yechishanu inodzivisa Caffeine (kuitira kuti chero nguva ipi zvayo yekufamba kwenguva yawakamisa kunze kwe app ichakwerera zvakare ).
Caffeine inoratidzirawo kuverenga kunobatsira pedyo neiri teri kwenguva yakareba sei kusvikira vheji rako ravhara.
Zviri nyore. Saka zvakajeka chaizvo kuti Caffeine haina kunyange yezvirongwa zvekushandisa. Kuti 'uise' iwe iwe panzvimbo pfupi unongotarisa paunokurumidza kuisa tile, asi zvose zvinokupa iwe mirayiridzo yekuushandisa uye sarudzo yekununura.
Zvakafanana nemishonga inonzi mazita, Caffeine haizobatsiri munhu wose, asi kana iwe wakamboshuva kukwanisa kupedza nguva yako yekuvharavira nguva iyi ndiyo iyo yaunenge wakamirira.
Mhemberero inogona kuva nzvimbo dzinobatana, uye Radiate inobatsira kuita izvi kuburikidza nekukuisa iwe mukutaurirana nevamwe vanhu vanoenda kumutambo mumwechete wakafanana newe.
Sarudza mutambo waunopinda uye iwe unogona kupinda musangano yakatsaurirwa, apo vanhu vanokurukura uye vakaronga kuti vanosangana uye vanosimudza zvayanenge.
Panewo chidimbu cheTinder-iyo apo iwe unogona kutamba pamusoro pemifananidzo yevamwe mutambo unosangana navo kuti utaure kana iwe usingadi kutaura navo kana kuti kana iwe mose muchiti hongu, purogiramu yega yega inotanga.
Saka kana iwe uri kushingaira mutambo uri woga kana kuti unoda kusangana nevamwe vanhu vatsva iwe uripo, Radiate inogona kubatsira, uye ine sarudzo huru yemhemberero muEurope uye neU.S.
Radiate inewo mutambo wemashoko, kusanganisira line-ups uye mamapu, asi hapana chaunenge usingawani kune imwe nzvimbo. Zvechokwadi ndizvo zvose pamusoro pehupenyu hwevanhu.
Yakanzi se Instagram of text, Boldomatic inzvimbo yekutambirwa nevanhu, apo iwe unogona kutumira mutsara kana maviri uye uchiitumira kunyika.
Izvi zvinowanzova kusanganiswa kwezvinyorwa zvepakutanga uye nhetembo, pamwe chete nemashoko anobva kune vamwe vanhu, saka zvakanyanya pamusoro pezvakagadzirirwa nekufemerwa pane kugoverana mhando dzemafungiro nemanzwiro aungaita pa Twitter kana Whisper. Asi chaizvoizvo iwe unogona kunyora chero chaunoda.
Iwe unogona kuramba usingazivikanwe kana kwete, tora mhinduro pane zvinyorwa zvako uye uchitevera, sezvinoitwa uye utaure kune vamwe vashandisi vese.
Iwe unogonawo kutumira mharidzo yakananga, uye kupfuurira mberi kwehupenyu hwako kune mamwe masangano evanhu akadai sa Facebook neTumblr kubva mukati me app.
Boldomatic inoratidzira kuti mune dzimwe nzira zvakaoma kupinza pasi. Vamwe vanyori vanomirira kukanganisa nematanda avo, vamwe kukuita kuseka, kana kufunga, asi zviri nyore kuwana zvinhu zvakanaka chete nekushambadza nezvinodiwa.
Kana kuti tongotarisa pane zvakashata uye tora zvakadzika mumvura inogara yakasimba, dzimwe nguva inoshungurudza, kazhinji inokurudzirwa munharaunda yakavakwa yakakomberedza.
Offline Survival Manual inotungamirira zvakakwana kune zvose zvaunoda kuziva kana uri murenje. Uye yakachengetedzwa pasina, saka iwe uchakwanise kuifambisa mukati mehlathi / jongwe / jungle / yako munda.
Kubva pane unyanzvi, saikutanga moto kana kuvaka chivako, kune mazano anobatsira, akadai sekuti kutsvaga mvura mumamiriro akasiyana-siyana uye kuti mbeu dzipi dzine uturu, zvose zvinofukidzirwa.
Pamusoro peizvozvo pane ruzivo zvinhu zvaunofanira kuenda newe kune dzimwe nzvimbo uye maitiro ekuita nemhando dzakasiyana dzemamiriro ekunze kana njodzi, sekuyambuka rwizi - saka zvinhu zvakawanda zvaunogona kuda kuziva zvakafukidzwa.
Pane zvimwe zvakawanda kunze kwe, zvakakamurwa kuva zvikamu zvakasiyana-siyana zvaunokwanisa kutamba pakati pemapombi, uye sezvo pane zvinhu zvose zvichibva kune zvinyorwa kune zvimwe zvinhu zvakanyanyisa, Offline Survival Manual ndiyo mutungamiri wevanhu vose. Zvakasununguka zvachose.
Pane kushayikwa kwepurogiramu mune dzimwe mharidzo - typos uye masvingo mashoma emashoko zvakanyorwa, pamwe nemifananidzo shomanana yekuiputsa muzvikamu zvakawanda. Zvadaro pane chokwadi chokuti kuva nebhuku rekuchengetedza pane chigoni chinogona kubuda kunze kwebhateri chingave chisina kunaka, saka iwe ungada kuunza bhuku repape zvakare.
Asi iwe unenge uchifungidzira kutora foni yako pamwe newe pane chero zviitiko, uye Offline Survival Manual inogona kuratidza kuwedzera kwakakosha - ndiani anoziva, iyo inogona kuponesa hupenyu hwako.
Tubio iyo nzira yakajeka, nzira iri nyore yekuwana mavhidhiyo nemavhidhiyo kubva pane foni yako kuenda kuterevhizheni yako. Inoshanda yakawanda seChromecast (uye zvechokwadi unogona kukanda kuChromecast) asi mitsamba iyo isingatsigiri zvakasimba mazita-mazita ekushambadzira mazano inoshandawo nayo.
Inobatsirawo kana uine DVNA / UPnP / AllShare yakavhenekera TV yeTV isingashandisi neGoogle Cast kana yakadaro, sezvo ichi chiri nyore nyore kutenga chimwe chigadzirwa chezvinhu.
Tubio inogonawo kukanda kuAmerica Moto TV, Roku, Nexus Player, Android TV, Xbox One uye Xbox 360, vose vane press of button - foni yako ingofanirwa kunge iri panzvimbo imwechete ye Wi-Fi.
Izvo yevhidhiyo ine web browser yakagadzirirwa yekuwana zvigaro uye zvizere zvekutarisa kana uchitanga kushanyira. Iwe unogonawo kufamba kubva kune app uye unoramba uchishandisa foni yako seyepanyama pasina kuvhara rwizi.
Pane purogiramu yep yebhadharo imwechete ye $ 2.99 / £ 2.49 iyo inobvisa marangaridzo uye inokwidziridzwa mhando yekutamba, asi tinogona kukurudzira kuedza kunze kwehurukuro yekusununguka kutanga, kuve nechokwadi kuti inokodzera zvaunoda.
Hazviwanzove kuti maGoogle apps anouya kuIOS pamberi pe Android, asi Chirevo Chinoitika akaita, sezvo yakagadzirirwa kugadzirisa Live Photos, kuitira kuti vauye vakanaka. Ikozvino kana iri kunze kweIndaneti zvakare, ichikubvumira kudhonza pikicha klipikari iyo iyo app inogadzirisa.
Zvikamu zvaunopfura zvinogona kuponeswa sevhidhiyo kana kuti GIF yakashandura uye zvinogoverwa pane zvekuchengetedzwa kwevanhu, uye Motion Stills inokuitawo kuti ushandise 'Fast Forward' mode, iyo inosvitsa kusvika kumaminitsi emavhidhiyo muchikamu chepfupi. Izvi zvakare zvakasimbiswa, kuti zvichengetedze zviri nyore, uye iwe unogona kutora iyo kutamba.
Chirevo Chinoita mabasa chete ezvitsva zvitsva - naizvozvo haugoni kuisa uye kugadzirisa chero chawakatopfura (kunyange kana iwe uchida kuchinja mavhidhiyo akare muGIF kune zvakawanda zvezvimwe zvinoshanda zvichaita izvozvo).
Asi pane chero chinhu chipi zvacho chitsva iwe unopfura Motion Stills inzira yakanaka yekuita GIF kana mavhidhiyo mafupi uye kuongorora kuti chinyorwa chinoramba chiri chese. Inokurumidza zvakare, sezvo nheyo dzakagadziriswa munguva chaiyo, saka haufaniri kumirira kuti iite yako clip, uye yakasununguka zvachose.
Kune zvakawanda zvakakura pakusimudza nekugara kwezuva pane iwe ungangodaro wakazviziva. Pane nguva iyo purogiramu iyi inotumidzwa mushure mekunge imwe, iyo inozivikanwa pakati pevatori vemifananidzo seine chiedza chakanaka.
Asi panewo nguva yebhuruu, nautical twilight, nyeredzi yezuva uye mamwe, uye iyi purogiramu ichakuudza nguva uye nguva yezvose, saka iwe unoziva zvose nezvezviitiko izvi uye unoda kukwanisa kuvabata, kana kuti unongoda kuziva kuti udzidze zvakawanda, Golden Hour anogona kubatsira.
Ndizvo chaizvo, ine mepu, iyo inokuratidza kutungamirirwa kwezuva uye zuva rovira, saka iwe uchaziva nzira ipi yekucherechedza (uye izvi zvinogona kubatsirawo pakuziva kupi kuisa zvirimwa nezvinhu mumba mako, zvichibva kupi? kuwana zuva rakanyanya).
Iwe unogona zvakare kugadzira zviziviso zvekuuya kwezuva, sunsets uye maawa egoridhe, uye app haisi zvachose.
Blackpills iri musha kune zviratidzo zvakasiyana-siyana zvaungagona kufamba pafoni yako kana piritsi. Zvose zvaro zvinyorwa zvekare, uye zvinosanganisira maitiro akawanda, akadai semamhanzi, anofadza, sci-fi nezvimwe.
Unhu hwehuwandu hunowanzove hwakareba zvakare, uye zvimwe zvinhu kunyange zvine mazita makuru akabatanidzwa, akadai saJames Franco.
Izvo zvose zviduku, kazhinji zvinopinda mazviri zvishoma nezvishoma 10-15 maminitsi, saka iwe unofanirwa kuwana nguva yekufananidza chiitiko kune chero kupi zvako uri uye chero chii chauri kuita.
Hazvina mari yakawanda ipapo (13 inoratidza panguva yekunyora), asi Blackpills anovimbisa kuwedzera imwe nhepfenyuro yepakutanga vhiki rese uye chiitiko chitsva zuva rega rega. Zvinoshamisika, zvakare zvakasununguka zvachose.
Pane zvimwe zvisiri izvo: haukwanise kuverenga zvinyorwa kuti uone usina kutenderwa, uye-nekugadzirisa - zvinongowanikwa pafoni kana piritsi, asi zvakazara zvakakodzera kufungisisa kana iwe uri kunze kwezvinhu zvekutarisa kana kufanana nepfungwa ye shorter, snackable content.
Kusvuta kwezuva kunodzivirirwa, uye zvakadaro zvinowanzoitika kune vakawanda vedu kakawanda, zvichida kuburikidza nekushaya hanya kana kungova nekunzwisisa zvakakwana pfungwa yekuti tinoda sunshcreen.
UVLens chinangwa chekubatsira nezvo kukuudza iwe UV index ikozvino uye nguva yose yezuva racho, uyewo izvo zvinorevei kwauri.
Uchishandisa mamiriro ezvinhu ikozvino pamwe chete nehuwandu hwawakapa, zvakadai seganda rako reganda uye zvepabonde, chirongwa ichi chichakuudza kuti iwe unokurumidza kukurumidza sei uye chii chaunofanira kunge uchiita pamusoro payo - pasinei nekuisa muchero wezuva kana kupfeka magirazi ezuva.
Iwe unogonawo kuudza rudzi rwechiedza chezuva chawakapfeka, pamwechete nebasa raunenge uchiita, uye UVLens achakuudza iwe nokukurumidza iwe uchada kudzorerazve, uye kukutumira iwe chiziviso kana yava kuda kusvika kuita saizvozvo.
Chaizvoizvo, kushandisa purogiramu iyi kunoreva nguva inotevera kana iwe uchipisa unongozviwanira iwe mhosva.
Kana uri kushandisa foni ne 16GB yedenga kana zvishoma iwe unogona kunge uri nyanzvi yekuita zvakanyanya zvekuchengetedza kwako, asi kunyange ne32GB kana 64GB zviri nyore kuzvidya zvose.
ES Disk Analyzer inoita kuti zvive nyore nyore kunyorera nzvimbo zvakare, nekucherechedza mapurogiramu nedzimwe nheyo dzausingadi, uye kubvisa.
Izvo shanduro inonyanya kuisa nzvimbo yekuchengetedza nzvimbo ndeyokwanisa kwayo yekuwana nekudzima mafaira akawandisa. Iwe unogona kunge usina kufunga kuti une zvakawanda zvavo, asi nguva yokutanga takamhanya nayo mazana akawanikwa.
ES Disk Analyzer inogonawo kudzvinyirira mifananidzo kuitira kuti ichishandisa zvishoma kudarika, pamwe nekusimbisa mifananidzo yakananga iwe unogona kudimburira, (nokuti inonyanya kukura kana isina kuonekwa kwenguva refu).
Mazhinji mapurogiramu ari pafoni yako acharamba achigadzira cache yemafaira anovabatsira kutakura nokukurumidza. Somuenzaniso, imwe purogiramu inogona kuchengetedza mifananidzo kune imwe device kuitira kuti irege kuitora nguva dzose kana ichivhura. ES Disk Analyzer ichakutaurira hukuru hwemapurogiramu emafaira ako ekubatsira uye rega uibvise izvi zvakare kana iwe usingafungi nezvehutano hwakadaro.
Uye ichasimbisa kunyanya mafaira makuru, kana pane imwe yei inoshandiswa, pamwe chete nemamwe mapurogiramu iwe kazhinji kana kusamboshandisa.
Iwe unogonawo kuita zvakadzika kupinda mukati mefaira system uye ona mafaira ose nemafaira akarayirwa nehukuru, nechisarudzo chokubvisa chero wausingadi.
Zvizhinji zvezvivigirisi izvi zvinogona kuwanika kune imwe nzvimbo, kana mumunhu akazvitsaurira faira kana muIyoyoyoyo, asi ES Disk Analyzer anovaisa vose panzvimbo imwe.
Sezvo chinongotarisa chirikuponesa iwe nzvimbo yose inoratidzwa neyoyo mupfungwa, saka unogona kuona pane imwe nzvimbo apo nzvimbo yako yekuchengetedza iri kuenda uye unoita chimwe chinhu pamusoro payo.
MaGIF akanaka, asi maGIF aine izwi rako pamusoro wepamusoro anogona kuve akanyanya kunaka - kana zvirinani ndiwo mafungiro kumashure Shabaam.
Iyi purogiramu yakasununguka inoita kuti utsvake kana kutarisa mumamiriyoni emaGIF, uye wobva wawedzera rekodhi rekodhi pane imwe. Inoshandisa maikorofoni yako, kuitira kuti unyore ruzha rwechinhu chipi zvacho chakakupoteredza (asi hachigoni kushandisa nziyo kana mafaira akangwara akatochengetwa pafoni yako zvinogumbura).
Kana wati wapedza iwe unogona kuzvichengetedza kana kugovera, pamwe nevevanhu vakawanda vevhidhiyo yevhidhiyo inotsigirwa kugovana, kunyange mune dzimwe nguva inotumirwa semavhidhiyo panzvimbo yeGIF inoputika.
Izwi raunenge wawedzera rinogona kunge rakangoita seGIF pacharo, nekuda kwezvikonzero zvakajeka, uye nechocho mupfungwa kune chikamu che 'Editor's Pick', chine sarudzo dzeGIF dzakagadzirwa nemushambadziri dzakabhenekera, pane dzimwe nguva nokuti ivo vari kure.
Uye kana iwe usingawani chero chakakodzera ipapo, unogonawo kushandisa 'Mapoka' tab uye wozorora pasi. Semuenzaniso, unogona kusarudza nzvimbo ye "Zvisikwa", uye kubva ipapo sarudza 'gungwa' kuti uwane GIF mvura.
Shabaam achiri achiri mu beta panguva yekunyora, saka inogona kusashanda zvakakwana, asi kana ichiita kunonakidzwa kukuru.
Kana iwe uchida kusununguka, zviri nyore kushandisa rugwaro scanner iyo inokutendera iwe kuchinja iyo inokonzerwa scan iwe uchatambudzika kuti urove Adobe Scan.
Kuverenga kuri nyore, tongedza mutsara pasi pekamera yefoni yako uye app ichasimbisa zvikamu zvachazoongorora. Kana ukangomira kuitira kuti rugwaro rwose (kana zvikamu zvose zvakakosha) zviiswe pachena, tora foni yako yakasimba kwemashure mashoma uye Adobe Scan ichaita zvese.
Ipapo iwe uchave unoverengwa scan, asi iwe unogona zvakare kurimika, kutenderedza, kuwedzera mamwe zviyero kufaira, shandura iyo ruvara (semuenzaniso ku 'Greycale' kana 'Whiteboard'), utore iyo zita, uye wozozvichengeta se a PDF kuna Adobe Gwaro Cloud. Uye kana ichinge iri muchimiro chePDF iwe unogona kuishongedza zvakanyanya - kuwedzera, kubvisa, kutevedzera kana kunyorazve zvinyorwa semuenzaniso.
Zvose zvese zvaunoponeswa zvinoramba zvichitsvaga kubva kuAdobe Scan (uye kubva pane chero chigadzirwa, sezvo ichichengeterwa gore), asi iwe unogonawo kutumira email iyo faira, kana kugovera chikwata kana faira pachayo mumashoko kana mumasangano ehupfumi, kana vhura nayo Adobe Acrobat.
Sezvo Acrobat iinewo Adobe yega uye maitiro ako akachengeterwa gore, haungashamisi kuona kuti zvinhu zvose zvawaisa muAdobe Scan zvinowanikwawo kubva pano, izvo zvinonyanya kupiwa zvakapiwa kuti Adobe Acrobat ndeimwe ye iyo huru PDF readers, saka zvisinei iwe wakaongorora rugwaro rwako zvingangodaro iwe unoda kuivhura muno, kushandisa Adobe Scan kunongoita izvozvo zvishoma zvishoma.
Isu tose tinoziva mvura yekunwa inokosha, asi inogona kuva nyore kukanganwa kuita, kunyanya kana iwe wakabatikana nezvimwe zvinhu.
Tsika yakasvika pakununura, asi, nemhando dzakasiyana-siyana dzakagadzirirwa kukupa iwe munyoro prod kunwa zvakawanda, uye Hydro Coach isimba rakasarudzwa.
Iwe unotanga nokupinda mamwe mazwi akadai sezera rako, zvepabonde uye uremu, uye kubva kune iyi Hydro Coach inoyera kuti unofanira kunge uri kunwa zvakadini.
Iwe unogona kuvhara kudya kwako nyore nyore, uchitaura purogiramu yehukuru hwezvimiti iwe unganwa kunwa kubva ipapo uye kungotora iyo yakakodzera nguva dzose pawakapedza kunwa, uye purogiramu ichakuyeuchidza kunwa kana usati waita saka mune imwe nguva.
Iwe unogona kuona pane chimwe chezvinhu zviviri zvawadhakwa nhasi uye kuti unofanira kunwa zvakadini pane zvakasara zvezuva uye iwe unogonawo kuona mavhote evhiki nepamwedzi uye pamwedzi.
Iwe unogona kusarudza kana kuenzanisa kudya kwako mu milliliters kana maridhi ounces, apo a Pro version yepurogiramu inobvisa zvinyorwa uye inowedzera mamwe mazita akawandisa e $ 4.49 / £ 2.49. Asi nokuda kwekusununguka, Hydro Koach inopa nzira yakakurumidza, yakajeka yekucherechedza kunwa kwako kwemvura, uye-zvinonyanya kukosha - kuti zvikuyeuchidze iwe kunwa zvakawanda.
Apex Launcher haisi itsva. Zvechokwadi yave iripo kwenguva yakareba, uye yaimbova imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzinoshandiswa. Zvadaro vateereri vakamira vachiri kutsigira, asi vakangobva vapa purogiramu basa guru rekugadzirisa hutsva hwehupenyu.
Kuchinja kwacho kunonyanya kuisa kuonekwa kunoenderana nemashanduro ezuva ranhasi eAroid, pamwe chete nekuputira purogiramu uye kubvisa zvibhakera, asi purogiramu yepamusoro inoramba yakawanda sezvairi nguva dzose: iyo, imwe yemasimba uye yakanakisisa interfaces inowanikwa Android.
Ichatsiva chero hupi hweUI iwe unahwo ikozvino - iva iyo stock Android kana ganda rekugadzirisa - uye kukupa hukuru hwakawanda kupfuura iwe waungambove nawo.
Iwe unogona kuchinja peji rekushandura peji reimba, ita chikwata chako chekugadzirisa, kuvanza zvinhu zvekushandura, zvakadai sedock kana bhodhi yemamiriro, sarudza maitiro echimiro zvemafolisi, sarudza pakati pemitauro yakasiyana-siyana yemadhora emhando yepurogiramu, uvanze mapurogiramu kubva paidheti, sarudza zviratidzo zvinogadziriswa uye zvimwe zvakawanda.
Muchidimbu, kana pane chikamu chekutarisa kana kunzwa kweAroid kuti iwe hausi kufara zvachose, pane mukanano wakanaka unogona kuchinja neApex Launcher. Uye zvinenge zvose zvikamu zvacho zvakasununguka zvachose, kunyange iwe unogona kuzarura zvimwe zvinyorwa nazvo Apex Launcher Pro ye $ 3.99 / £ 3.09.
Pane tsika yakareba yekuwedzera kuverenga kwakanaka kumifananidzo yakanaka. Zvingave zvepokumikidza, mharidzo, chiziviso kana chimwe chinhu, mutauro unowanzopfekedzwa pamufananidzo, uye kunyanya chikamu che Times New Roman hachigadziri.
ne Font Studio iwe unogona kusarudza kubva kune 120 inofadza, isina kujairika uye yakawanda maziso ekubata, pamwe nekuwedzerwa nguva dzose. Zvadaro, unogona kuchinja usayizi, ruvara, maitiro uye kujekesa kwepafaira, wedzera mithunzi uye isa chigumisiro pamusoro pechifananidzo.
Kana iwe uchida kuti rugwaro rwako rwuve rwakanyanya kuwedzera iwe unogonawo kuwedzera huwandu hwemaumbirwo, somuenzaniso kuisa rugwaro mudenderedzwa. Izvowo zvinogona kuiswa pane zvaunofarira, kana kuti iwe unoshaiwa kufuridzirwa unogona kutanga ne-pre-yakagadzirwa template, kubatanidza faira, maumbirwo uye kunyange shanduro mifananidzo nemifananidzo.
Iwe unogona zvakare kuwedzera chero chemazana emashiripiti kune zvisikwa zvako, uye unobatanidza kana kubatanidza mifananidzo. Pasi pose, Font Studio ine yakasimba yezvidzidzo zvekunyora uye zvese zvachose zvakasununguka.
Izvozvo zvakati, apo zvisikwa zvako zvingave zvakanaka purogiramu pachayo haisi. Pane kudaro, yakazara nezvizivo. Tingafara tichibhadhara mari shoma kuti tivabvise, asi zvinosuruvarisa hazvisi izvo zvingasarudzwa.
Swap swap apps hazvisi zvitsva, asi Microsoft Face Swap inopfuurira mberi kupfuura yakawanda, nokuti pamwe chete nheyo dzekukwanisa kuparadzanisa chiso chako neshamwari kana chimwe chinhu mumamiriro ako ezvinhu, Face Swap zvakare inoratidzira kukuratidzira zvaunotarisa semakumbo akasiyana-siyana uye mune zvakasiyana-siyana nekushambadzira chiso chako nemifananidzo yakakodzera inowanikwa kubva mumambure.
Izvo zvinoshandiswa purogiramu yacho uye inoshandura chiso mumifananidzo uye inoita basa rakanaka rekugadzirisa chiso chako, nekuedza kuenzanisa musoro kutenderera, ruvara rweganda uye chiedza.
Uye kana iwe usingadi chero hupi hwezvikwata zvaunopa iwe kana kuti unoda kushandisa chero ipi yezvifananidzo mumutambo wako, chivakwa chekugadzira mufananidzo chinokubvumira kutsvaga internet kuti mufananidzo wakanaka.
Pakupedzisira, pasinei nemapoka ose emifananidzo, Face Swap ichiri kungowedzera kunakidza kudarika zvinyatsobatsira, asi inokurumidza uye yakasvibisa kupfuura yakawanda yemakwikwi.
Isu tose tinopedza nguva yakawanda yekutsvaga webhutano, saka tinoda kuti ive yakakurumidza uye iri nyore sezvinobvira, uye Firefox Focus inobudirira iyo, pamwe nekuchengeta deta yako yega uye yakachengeteka.
Purogiramu, iyo yakatanga hupenyu paIOS, inokupa mushure wekutsvaga musikana pasina mawedzera-uye asina tabhi, asi inotakura mapepa nokukurumidza uye inotora 3.5MB chete yemuchina pane imwe kifaa chako.
Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti, inozvidzikisawo nhoroondo yako kana iwe ukavhara, zvichitoita senge zvakavanzika kana nzira dzinofungidzirwa mune mamwe mabhurawuza, asi otomatiki uye nguva dzese. Uye inoenderera mberi, ne - semuenzaniso - isingaonekwi mune yako runyorwa rweazvino maapp.
Firefox Focus inokuita kuti udzivise vateereri vemadhora, analytic trackers, vateereri vevanhu uye vamwe vezvikwata zvehupenyu, uyewo mafonti ewebhu - kunyange chero ipi zvayo inogona kushandiswa kana kuvharwa, kana iwe uchida kuvadzivisa.
Iwe unogona zvakare kusarudza injini yekutsvaga yaunoda kushandisa uye kuisa Firefox Focus sewe browser yako yekutsvaga, saka hukama huchazonyatsovhura mairi.
Uye ndizvo. Pakuishandisa iyo inotonhora kusvika pane chinyorwa chekugadzirisa nemaoko mashomanana ekugadzirisa uye zvakare huru web browser. Zviri nyore. Zvichida zvakajeka kune vamwe vashandisi, asi kana uine handsetsetsi shoma-simba, imwe ine nzvimbo shoma yekuchengetedza, kana kungokoshesa mararamiro ako, Firefox Focus ine ma browsers akawanda anorohwa.
Nyatsoongorora zvaunoshandisa zuva roga roga uye ungashamiswa nezvamunowana: iyo mafifesi anogona kunyanya kuwedzera, uye yako Mhando yekudhakwa ingave isingabviri.
Zvimwe zvishomanana zvingashandurwa zvinogona kukuponesa zvakawanda, uye iyo ndeimwe yezvinangwa zvemufambisi wemari se Fortune City, iyo inokuita kuti uone uye uenzanise mari yako neyekubuda kunze kwemashopu mashomanana.
Inovaka mapati uye mafirimu pane nguva kuitira kuti iwe uone kunyatsoenda kupi mari yako uye kuti uri kushandisa mari yakawanda sei.
Asi zvakasiyana nevevamwe vezvemari, Fortune City inoshandura ikava nzvimbo yakanakisa yekuchengetedza guta, yekuvaka zvivako zvitsva nguva imwe neimwe paunopinda mubhadharo kana kubuda, kukupa mubayiro nekubudirira kwekushandisa mari zvakanaka kana kutevera tsika, uye kunyange kukurega iwe kukurwisana neshamwari kuti uite the best township.
Ndiyo mhando yemutambo, asi ine nzvimbo yakawanda yekufambira mberi kuchengetedza kufarira kwako, uye inoita kuti zviitiko zvose zvemari kutevera zvinonakidza zvikuru. Kana iwe uchida kukurudzirwa kutarisira zviri nani mari yako (kunze kwemari inogona kukuponesa), Fortune City inogona kuita zvinyengeri.
Vanhu vanowanzoratidza hupenyu hwavo nenzira yakanaka pamusoro pehuwandu hwemagariro evanhu, vane zvinyorwa pamusoro pezororo neusiku kunze kunze kwemazuva mashoma ari pakati kana manzwiro pasi.
Lyf yakasiyana, sevashandisi vanoisa 'marwendo' avo mumatambudziko makuru, zvakadai sekurwara, kuzvidya mwoyo kana kuora mwoyo. Iwe unogona kutevera uye kutsigira vamwe vashandisi munzendo dzavo nekupindura kana kuita kune zvinyorwa zvavo, kana kutanga rwendo rwako mubasa rekuvaka nekuvaka boka rakanaka rakakupoteredza.
Uye kunyange zvazvo zvakawanda zveRi zvichinyanya kutaura nezvezvinhu zvakakomba, unogonawo kugadzira rwendo kurongedza kuverenga kwako, kufamba kwenyika, mitambo, mapurojekiti nezvimwewo.
Rumwe rutivi rwendo kubva kumunhu mumwe nomumwe rune chokuita nehumwe nyaya kana kutevera, asi iwe unogona kugadzira nzendo dzakawanda sezvaunoda uye ugozvigovana nenyika kana kuti uzviite pachedu, nokudaro urega izvo zvaunosarudza zvichivatevera.
Kubika kudya ndiyo hafu yehondo. Chokutanga, unofanira kuwana zvipiro zvezvinhu zvaungada kudya, izvo zvinogona kuoma nekudya zvakasiyana siyana zvinodiwa.
Mealime Chinangwa chekuita kuti zvinyorwa zvose zvive nyore, nekuita kuti usarudze kubva kumarudzi akasiyana-siyana, ivai vegetarian, paleo, pasi carb, flexitarian, pescetarian kana pasina zvibvumirano zvakasungwa, zvino isa pachena chero zvipi zvese zvinokonzera mishonga kana zvibvumirano, uye pakupedzisira chero zvigadzirwa zvamusingadi.
Sarudza kana iwe uchida kuti zvokudya zvive nezvidimbu zviviri kana mana uye iwe pakarepo uchaiswa nemenyu, ine zvikamu zvina zvekudya zvinokodzera zvaunoda. Zvinoshandiswa kwavari zvinongowedzera kuwedzerwa kune imwe nzvimbo yakagadzirwa mune zvekudya, zvichiita kuti kutengesa kuve nyore, uye ipapo zvose zvakasara ndezvokubika.
Zvechokwadi, Mealime inobatsira nechechi ichowo zvakare, kutora imwe yemaitiro recipe app basa, neshato nhanho mirayiridzo yezvokudya imwe neimwe, uye zvinhu zvakangwara sekuchengeta chinyorwa paunenge uri mune recipe uye uchienderera mberi kumirayiridzo inotevera apo iwe unosungira ruoko rwako pamusoro pekuratidzira, saka hauzombofaniri kuibata.
Vhiki yoga yoga uchataurirwa neurongwa hwekudya hutsva, kuitira kuti iwe usati wakaramba uchidya zvinhu zvakafanana nguva dzose - kunyange iwe unogona kuchengetedza zvido zvako - uye iwe unogona kuchinja zvaunofarira uye zvinoda chero nguva.
Mealime inowanzosununguka, asi kana iwe uchida kutarisa ruzivo rwezvokudya, tora zvakasarudzwa zvereji uye uwedzere manotsi kumarepeti unofanira kutumira ku Mealime Pro pamutengo we $ 5.99 / £ 6.49 pamwedzi kana $ 49.99 / £ 51.99 pagore. Pamwe, taizobatana nehurukuro yakasununguka.
TimbreZita rakakwana ndeye 'Timbre: Dzvora, Join, Shandisa mp3', uye iyo inokuudza zvinenge zvose zvaunoda kuzive nezvazvo: ichi chirongwa chekucheka, kubatana nekushandura mafaira.
Asi iyo MP3 inotora muzita pane kunotengesa, nokuti Timbre inogonawo kushanda magetsi pa WAV, FLAC, M4A, AAC, PCM, AIFF, OIF, WMA, ALAC, MP4, AVI, FLV, MOV, WebM, MKV uye MPEG mafaira.
Iwe unogona kutendeuka kubva kune imwe faira faira kune imwe, iyo inobatsira kana, semuenzaniso, mimhanzi yako kana vhidhiyo muteereri haafariri imwe faira yefaira.
Unogonawo kuderedza mafaira emavhidhiyo nemavhidhiyo, kana kubatanidza mafaira akawanda mune rimwe, raunogona kuita kana iwe uchigadzira pamwechete vhidhiyo ine mifananidzo yakawanda, kana kuita mixtape.
Icho ndicho musoro wehutano hweTimbre, asi panewo zvigadziro zvekubvisa mutsara kubva pane faira yefaira, kuparadzanisa rimwe chete faira rehurukuro muzvikamu zviviri, uye shandura bitrate yea audio file.
Zvose izvi zvinhu zviri nyore kuita, neTimbre sporting inonzwisisika, uye yakasununguka zvakare.
Iwe unoda kuisa humwe humwe mubhokisi rako rekushandisa? Astro ari pano kuti aite izvozvo chete, kubatanidza shanduro yakasimba neAI chatbot.
IA (inonzi Astrobot) haisi yepamusoro pompomp kure, uye kana iwe wakambomira kana usingakwanisi kuwana chimwe chinhu unogona kungozviisa mubhokisi rekutarisa uye uwane rubatsiro.
Uyewo nekukuudza iwe uye kuti ungakwanise sei kuita zvinhu nechokuita, Astrobot inogonawo kuratidza zvinhu zvaungada kuzvitsaura kubva pane kana archive, kana vanhu vaungada kuita 'VIP' (saka vanoita ma-mail avo ku kumusoro kwebhokisi rako rekudisa).
Pakupedzisira, Astrobot haina nzvimbo iri pedyo ine simba seGoogle Assistant, Alexa kana Siri. Bvunza mubvunzo usingabviri nemeiri uye iwe zvichida haungagoni kuwana mhinduro yakawanda, asi sevatsigiri vemu email vakazvitsaurira vanoita zvakanaka, uye havana makwikwi akawanda.
Kune imwe nzvimbo, purogiramu yeAspro haina kushamisa, asi ichiri yakasimba kwazvo. Emails kuti vatongi vayo vave vakakosha icharova Bhokisi reKubhokisi Rako Rokutanga, uye rinowedzera pane izvi nekufamba kwenguva, kudzidza, somuenzaniso, kuisa ma email kubva kuvanhu waunotaura navo zvakawanda.
Izvo zvakare izere nezvinhu zvakanakisisa, sekukwanisa kuronga maimeri, kuisa zviratidzo zvinogadzirisa zviratidzo, kuudzwa apo email inosvinudzwa, uye kutumirwa zviyeuchidzo kana usina kupindura kune ma email maiko anokosha.
Chinhu chikuru pane izvozvi ikozvino kuti Astro inoshanda chete ne Gmail uye Office 365 nhoroondo, asi kutsigirwa kune vamwe kunonzi kuuya nokukurumidza.
Mifananidzo yako yefoni ingave iri chimiro chaunotarisa kupfuura chinopfuura chero chipi zvacho, pamwe nekuve chinhu icho munhu wose anoona chero nguva iwe uchibudisa foni yako, naizvozvo zvakakosha kusarudza chimwe chinhu chinotyisa.
Izvozvo zvinoreva kwete kungosarudza mumwe waunofarira, asi imwe iyo inofanana nehuwandu hwemashoko efoni yako, uye Wallrox Wallpapers inoita izvozvo zviri nyore, sezvo inotarirwa kupa zvikwereti zvinowirirana nechitarisiko chekutanga cheAroid, Material Design.
Iwo ese mapikicha epakutanga, saka haungawani kune imwe nzvimbo, uye kune mazana kusarudza kubva - akapatsanurana mumhando dzakasiyana-siyana - kuitira kuti iwe unogona nyore kusefa iwo kubva pane zvaunofarira iwe.
Vose vari vose muQHD kana kuti yakagadziriswa, saka vanofanirwa kutarisa zvakanaka kunyange kune yakakura, yakakosha zvikuru smartphone skrini.
Uye zvakanakisisa pane zvose: zvakakwana zvachose!
Kufanana nemitambo? Kufanana nemimhanzi? Zvino pane mukana wakanaka waunoda Red Bull TV. Chirongwa chacho chine zviratidzo zvinoratidzika uye zvichitsvaga, mafirimu uye zvinyorwa zvehurefu hwakasiyana-siyana, huzere nezvakazara zvemitambo, uye mararamiro emitambo yemimhanzi kubva kumativi ose enyika.
A kadhi yakagadzirwa inokuudza kana zviitiko zvose zviri kuuya, saka iwe hauchazovipo ivo vanorarama, asi panewo kusarudzwa kukuru kwezvinhu zvinowanika nyore panguva dzose.
Uye hutano huri hukuru kwazvo. Iwe unogadzirisa zviitiko zvakakwana, kazhinji zvakakanganiswa neunyanzvi hwekunyora, apo zvinyorwa zvinowanzove zvakanyatsogadzirwa uye kukupa kunyatsoongorora mitambo uye tsika. Muchidimbu zvinoratidza dzimwe nguva zvinorega kukanganisa, asi zvakadaro nguva yakanaka muurayi.
Iwe unokwanisa kugovera zvinyorwa kufoni yako kana piritsi, uye kana iwe usina ruzivo kana chiratidzo chinogona kusarudza kudonha hutsika hwehupenyu.
Panewo rubatsiro rweKromecast, saka unogona kutarira Red Bull TV pachikona chikuru zvakare, uye kana iwe usingashamisi mitambo kana mimhanzi kunewo kusarudzwa kwezviratidziro zvakatsaurirwa kune dzimwe nzvimbo dzenharaunda yakakurumbira, yakadai semitambo.
Lenka iyo iri nyore uye yakasununguka kamera app, yakagadzirirwa kutora mifananidzo yakasviba neyechena. Kusiyanisa nekushisa kwemavara kunogona kugadziriswa uchishandiswa paviri yevashandi, unogona kutora kuti uise pfungwa kana kuti iine app inosarudza nzvimbo yekutarisa, uye nemaoko iwe unogona kushandisa mabhii ehurukuro kutora mufananidzo, panzvimbo pokutora peji.
Lenka haakuregi iwe kushandisa flash, asi zvinonakidza iwe unogona kusarudza kujekesa vateereri vako nekugara kwechiedza kubva pa LED flash bulb.
Hapana chimwe chinhu kune iyo - isu takati iyi yakanga iri purogiramu iri nyore - asi kana iwe unobatana nemarongero kana kwete Lenka inogona kutora zvakanyanya mutsvuku uye mutsvuku mutsvuku, uye pane shanduko yakagadzirwa yakagadzirwa, ichiita kuti uite uye uchinje photos.
Kana vana vako vachida kungotarisa pazvikwi pane kutamba kunze, ipapo Kunze Mhuri Inofara nePlum inogona kuva mhinduro.
Yakagadzirwa naPBS Kids, purogiramu iyi inopa 'misheni' yezuva nezuva inogona kuumba hwaro hwekufamba kwemhuri uye mazuva, kunze kwekudzidzisa vana vako pamusoro pezvisikwa uye sayenzi.
Iko kune hutumende hwe 150, ine maoko mashoma akasiyana-siyana anopiwa zuva rega rega, mienzaniso yaro inosanganisira kutora selfies nezvipembenene kana kucherechedza mhando dzakasiyana dzemamiriro ekunze iwe unosangana nawo.
Imwe nzira inotarisa kufambira mberi kwako uye inobudirira kunze kwekubudirira mabheji, uye zvose zvakaputirwa muvaravara, mifananidzo yemifananidzo iyo vana vaduku vane chokwadi kuti vanoda.
Wunderlist zviri pachena kuti ndiyo yakanakisisa yekuita-purogiramu app pane Android, asi haichavi kwenguva yakareba, sekuti Microsoft inenge yatenga uye iri kuronga kuti pakupedzisira ivhare pasi, mukuda kwayo yega To-Do app.
Iye zvino Microsoft To-Do haisi yakazara-inowanikwa seWunderlist, asi ichava, neMicrosoft ichivimbisa kuwedzera zvakanakisisa zvinowanikwa neWunderlist kwazviri, uye zvatove zvakakosha.
Inonyanya kuve yakagadzirika pamunhu mumwe chete, sezvo iwe unogona kutarisa mazita akasiyana-siyana nenzira dzakasiyana, dzakadai sealfabheti, nezuva rezvisikwa, kana zuva rakakodzera, uyewo kuchinja mararamiro emuvara uye mifananidzo yakabva.
Iwe unogonawo kusarudza kuratidza kana kuvanza zvinhu zvakagadzirirwa pane zvinyorwa zvako uye unogona kuenzanisa nhare dzako pakati pefoni yako nekombiyuta, saka iwe hausi kure navo.
Icho chikwata chakakonzerwa chakagadzirirwawo zvakare, uye nokuda kwevashandisi veWunderlist pane sarudzo yekuisa mazita ako, izvo zvisingabatsiri, sezvo mazuva e-app ava akaverengwa.
Iko kune zvakawanda zvekushandisa mapeji, asi mashomanana ayo ose sehutano hwakananga uye anotora mapepa pamwe chete Runtasty.
Kubva kubva kuvenzi veRuntastic hazvishamisi kuti izvi zvine utano hwakanaka, pamwe chete nemapapiro anogamuchirwa neve dietitians uye akakodzera zvakasiyana-siyana zvinoda, pasinei ne-carb, yakakwirira mumapuroteni, low calorie, gluten pasina, kana zvimwe nhamba yezvimwe zvinhu .
Mamwe mapeji ane zvidhori nezita rawo, zvichiratidza zviri mukati maro, asi unogonawo kuchenesa nezvinhu zvakasiyana-siyana, zvakadai sezvo zviri kumusoro, pamwe nenguva yekugadzirira uye kuoma.
Uye kana iwe uri mune kamukira unogona kuona ruzivo rwaro rwekudya uye rwekudya zvakadzama, asi iwe unogonawo kuona zvose zvinyorwa-nhanho mirayiridzo yakanyorwa uye vhidhiyo yemuongorori wega rega imwe neimwe, iyo inosanganiswa yausingazoiti tsvaga mune zvese mapurogiramu.
Nekwanisi yekuumba urongwa hwevanyadzisa zvakare, uye ona 'ma-to' mavhidhiyo yezvinhu zvose kubva pakagadzira avocado pakugadzira steak yakakwana, pane zvakawanda zvaunoda pano, uye apo kunyatsosarudzwa kwemakacheti kunogona kunzwa zvishoma zvishoma purogiramu yapfupi, saka tinotarisira zvakawanda zvichawedzerwa kwechinguva.
Kutsvaga yakanakisisa yekutsvaga kwekushandisa kwevhisi dzimwe nguva kunoratidzika sechinhu chinonyangadza sekuwana iyo ndege, asi Momondo iri zvirokwazvo kumusoro uko.
Kana uchangobva kusarudza zvipatara zvakakodzera uye mazuva iwe unogona kuwedzera marudzi ose ekutsvaga, zvakadai sokuma kwemahotera aripo, nguva yekutiza, nguva iyo ndege inoparadzana kana minda, kirasi yetikiti uye ndege.
Kuita zvinhu zvakanyanya kana zvishoma zvayo sezvaunenge uchida, ipapo Momondo achakuratidza maziso ose akakodzera, neashoma, nokukurumidza, uye 'zvakanakisisa' (iyo inoratidzika seyo yakanakisisa yejikuri uye yebhadha) yakasimbiswa.
Kana iwe uchigadziriswa nemazuva iwe unogonawo kuona girafu rinoratidzira mutengo wezvikepe pazuva rega rega, kuitira kuti iwe ugone kupinda mumba mumazuva anodhura pane imwe nguva.
Uye kunewo chikamu chekubhura hotera, neyokugadzirisa kwayo yekutsvaga - kusanganisira zvipo, hurumende yepamusoro, nyanzvi yevashanyi, mutengo uye rudzi rwekugara iyo, kuitira kuti iwe ugone kutora rwendo rwako rose kubva kune rimwe chete.
Wakambozviwana uchizvibvunza kuti wakashandisa sei data rakawanda kudai? Kana kungo funga kuti ingani data rako raunoshandisa chaizvo? Kuti uwane mhinduro dzemibvunzo iyoyo - uye nezvimwe - zviripo GlassWire, iyo iyo inoshandisa zvose zvefoni yako kushandiswa kwepafoni, pamusoro pe Wi-Fi uye nhare dzedhare.
Inogona kukuudza kuti iwe wakashandisa zvakadini pane zvakasiyana-siyana nguva dzakasiyana, uyewo kuti zviyero zvipi zvese zvauri kushandisa, uye mapurogiramu akanyorwa nehuwandu hwavakashandisa, saka unogona kuona pane zviso izvo kushandisa zvakawanda.
Iwe unogonawo kuona magrafu kuti uone mapeji uye zvikwata zvekushandisa kwako kwedhesi, uye shandisa mazano kuitira kuti uzive pawakashandisa imwe chiyero kana uri kuswedera kumwedzi wako wemwedzi.
Zvose izvo uye GlassWire iri purogiramu yakaisvonaka yakagadzirirwa zvakare, asi inodhura zvachose chinhu.
Zvinenge zvisingabvumirwi pachava nenguva apo iwe unofanira kutumira foni yako kumumwe munhu, zvive kuti uvaratidze mimwe mifananidzo kana kuti vasaita foni, asi izvo zvingave zvisingadi ndezvengozi yekutamba kuburikidza nemamwe mapurogiramu ako.
Kana, zvakaenzana, iwe unogona kunge usisina tsika yekupa foni yako, uye hausi kunyatsoda kuivhura nguva dzose kana iwe uchiishandisa, asi uchida kuchengeteka kwezvinhu zvako zvakaoma.
Chero nzira, Norton App Lock inogona kubatsira, kuburikidza, zvakanaka, kuvhara mapurogramu ezvasarudzo yako, seri kwe PIN, purogiramu kana kuti minwepa scan.
Izvo purogiramu pachayo iri nyore kushandisa - ingosimbisa zvidzidzo zvekuchengetedza zvaunoda, ipapo tapira padlock pedyo neipi ipi yaunoda kuvhara. Kana wapedza, uchawana lock yaN Norton chero iwe (kana ani zvake) achiedza kutanga purogiramu.
Kunyange zvazvo Norton App Lock iyo isiri yega sarudzo yeiyi ndiyo yakanakisisa yatakatarisana nayo, sezvainokurumidza, kutakisa pakarepo unobata purogiramu yakachengeteka, pane kukuchengetedza iwe kumirira. Icho chakanakawo zvekuti haufaniri kuvhara purogiramu purogiramu kusvikira iwe uvhara chivharo, uye ine zvimwe zvinhu zvakanakisisa zvakare, seye-tapodhi yekuvharavha kwezvinhu zvose zvaunofunga kuti unofanira kuchengetedza.
Iko kune marudzi ose ezvibatsiro zvekubatsira iwe kuwana foni yako kana yakarasika kana iya iya, asi Pocket Sense chinangwa chekuvhiringidza mbavha yekuedza kuibata pakutanga.
Izvo purogiramu yacho inonzwika alamu chero nguva foni yako ichibviswa muhomwe yako, kuitira kuti ugone kubata mbavha tsvuku.
Saizvozvowo, unogona kuisa iyo kuti inzwire alamu kana foni yako isina kubviswa kubva kunejaja yako kana kuti yakabva kune yawakarisa.
Irosi inogona kubviswa kana foni yako isati yavharwa, uye iwe unogona kuisa nguva shomanana kuchetara isati yaenda, ichikupai nguva yekuvhura foni yako kutanga uye nokudaro dzivisa mavhamusi nguva dzose paunobata foni yako kubva muhomwe yako.
Asi ani naani asingakwanisi kuzarura foni yako achabatwa nehren blaring, kunyange kana foni yakagadzirirwa kuve yakanyarara, saka ivo vanoziva kuiisa pasi zvakare nekukurumidza.
Google Earth hachisi chinhu chitsva, asi chave chichivandudza zvinyararire pamusoro pemakore uye kana usina kuchishandisa kwenguva yakati zvakakodzera kukokerazve.
Kwete chete iwe unogona kuona nyika yakazara 3D, uye kunyange kupinda mukati kutarisa zvakanyanya neStart View, asi chinonzi Voyager chinoita kuti iwe uswedere pedyo uye iwe pachako nenzvimbo dzausingazombowana mukana kune imwe nzvimbo.
Unogona kutsvaga matombo emakorari ari pasi pegungwa, kutora rwendo rwekuGree Canyon, unofamba-famba uchienda kumamoriziyamu nezvimwe, zvose usina kusiya sofa yako, uchishandisa musanganisi we Street View, makadhi emashoko, ma-high-quality photos nemavhidhiyo.
Pasinei nokuti iwe unoda kuva chikwata chevatongi, ronga rwendo rwechokwadi kana kungodzidza uye kufuridzirwa, Google Earth ichaita basa.
Nzira iyo nhau inopihwa iri kutanga kunzwa kuti yakwegura. Zvechokwadi, tine mifananidzo ye24-awa, asi isu hatigone kunyatsotora zvatinoda kunzwa nezve nguva.
Haystack TV chinangwa chekugadzirisa dambudziko iroro nekukutendera iwe kuvaka nhaurirano nemashoko ako anofarira zvinyorwa uye zvidzidzo, uye nekukupa iwe nekupa mavhidhiyo anoenderana navo, zvishoma Flipboard asi nokuda kwevhidhiyo.
Iine mifananidzo yakawanda yemashumo, pamwe chete nemichina inotarirwa pamitambo yemavhidhiyo, tech uye zvekuvaraidza, uye iwe unogona kuona nyaya dzose dzakakonzerwa iwe pakarepo, kusvetuka kubvisa chero iwe usingafariri, usati wamboshaya mutsara nokuda kwevhidhiyo yemavhidhiyo yemifananidzo.
Uye iwe hausi wekutarisa izvi pafoni yako kana piritsi, sezvo Haystack TV inewo chitsigiro cheCromecast, ichisiya chikoro chemashoko epakuvamba kamwe-kamwe kunzwa kunzwa zvakanyanya.
Zvinyorwa zvitsva zvinowanikwa kuNetflix zuva roga roga, asi kazhinji - kunze kwekuti iri rekutanga reNetflix - basa hariti kuita basa rakakura rekusimbisa, saka iwe unogona kunge usingazivi firimu yawakatarisira nomwoyo wose wakaita iro basa.
Zvichida zvakanyanya kuipa, Netflix haisi miedzo chaiye yekusimbisa mafirimu uye inoratidza kuti ichave ichisiya basa nokukurumidza, ichikusiya usina chizivo chokuti iwe wakangowana mazuva mashomanana asara kuti apedza kubheta iyo sitcom kana kuti pakupedzisira uone iyo nyaradzi.
Asi ne Upflix iwe unogara uchiziva. Chirongwa chacho chinokupa iwe nemazita maviri anongororwa matsva - mumwe anokuratidza izvo zvitsva, uye imwe inokuratidza izvo zvisingasviki kwenguva refu.
Iwe unogona kutaurira purogiramu yako Netflix region (saka pose paunenge uri munyika ichave nemashoko akajeka), unogona kuwana pikicha yekusimbisa zvekuvandudzwa, uye imwe nheyo inofambidzana nezuva iro rakawedzerwa kana kuti richave richibva.
Pamusoro peiyo, unogonawo kuona mafambiro uye ruzivo pamusoro pezvinyorwa, uye ona IMDB neRotten Tomates zvikoro. Panewo hubatanidza kukuendesa kurudyi rwepaji yavo paNetflix kana IMDB, uye kune zvimwe zvishandiso zvekutsvaga kuti uwane mazita, maitiro kana zvikoro kana uri kutsvaga chimwe chinhu chinonyanya kujeka.
GrammarPal iri yose-in-one spelling uye grammar checker yezvose zvaunonyora mufoni yako. Chero ipi yaunenge uri purogiramu yako, svikiro duku rebhuruu richaonekwa apo iwe uri kupinda mavara uye kana iwe uchiputira denderedzwa icharatidza nhamba, zvichiratidza kuti zvikanganiso zvakadini zvakaratidzwa mumagwaro ako.
Tora zvakare kuti uise pachena zvikanganiso zvose, nekodhi-coding inoratidza kana iri girama kana kupereta kwepelpel, ipapo bhopi pane chero kukanganisa kucharatidza kuchinja.
GrammarPal inogadzirisa kukanganisa, asi inokuudzawo kuti nei ichifunga chimwe chinhu chisina kukanganisa, uye kana ichigara ichiunganidza chimwe chinhu chausingawirirani nacho chinogona kugadzira dudziro yemutauro kana kuti murairo kuti ita kuti purogiramu isakanganwe.
Iwe unogona kuisa nzvimbo ye bubble, kuti uve nechokwadi chokuti nguva dzose iri kunze kwenzira, uye yakawanda zvakakwana zvokuti inofanira kunge iri nyore kuregeredza chero zvakadaro, asi haisi yepamusoro kupfuura pompombi kure kukuita iwe mutauriri wepamusoro.
Iwe unogona kufunga kuti kushanda zvakasimba kwemaawa ekupedzisira ndiyo nzira yakanakisisa yekubudirira, asi vanhu vazhinji vanoona kuti chaizvoizvo kutora nguva shoma nguva dzakapfuura zviri nani. Icho chirevo chakazivikanwa sekuti nzira yose yakagadzirwa pamusoro payo, inonzi Pomodoro Technique, uye ndizvo izvi zviri pamwoyo we Tide.
Pfungwa iyi iri nyore: shandai kwemaminitsi e25 uye tora maminetsi emaminitsi gumi nemana. Pashure pebasa re 5 iwe unowana nguva refu, 4-mishoma kuputsa.
Imwe nzira yaunogona kuwana mabasa, uye zvechokwadi inobatsira kuedza kana iwe uchinetseka kuisa pfungwa, sekuputsa zuva kuva maduku maduku kunogona kuita kuti inzwe kuchinjwa, uye zvimwe uchawana kuti iwe unoramba kuzarura Facebook paunenge uchishanda apo iwe unoziva kuti uchapiwa pfupa pfupi.
Iwe unogona kungoshandisa nguva yakajairika yezvinhu izvi zvose, asi Tide inogadzirisa hurongwa, kukuratidza iwe mushure mega roga basa kana kupedza nguva yakapedza, asiwo kukupa mamwe masimba, achikubvumira kuti uchinje basa uye kupedza nguva, kana kuti uchinje kuti vangani basa nguva yaunoda musati wapera nguva refu.
Apo inyevha inopera iwe unofanira kutora kuti utange basa rinotevera kana kupedza nguva, iyo inobatsira kupfuura iyo inonzwika, sekuti, somuenzaniso, iwe ungasave wakagadzirira kuenda pakapera mushure mema25 maminitsi chaiwo.
Tide inewo zvakagadzirirwa zvakagadzirirwa uye zvingasarudzwa zvinotamba zvakasununguka zvinonzwika paunenge uchishanda. Tinogona kurarama pasina chikamu ichocho, asi kana, kufanana nesu, iwe unofarira kushanda mukunyarara kupfuura kune manzwi emafungu anokwira, iwe unogona kuzvidzivisa nyore nyore.
Kushandisa mabasa akashandiswa kusanganisira kuzadza zvikumbiro zvemarenda akawanda kwenguva refu kuti usambonzwa zvakare uye kushamisika: kana nguva iyo ingave yakashandiswa zvakanaka kudzidza Japanese kana kugadzirisa nyika nzara here?
ne LinkedIn Job Search pane chikonzero chekuti iwe uchanzwa kubva pane zvawakarota basa, asi zvinotora zvakawanda zvekutambudza kwekushandisa zvishoma, sezvo mazhinji emabasa ari purogiramu iyi ngaakuise kushandisa uchishandisa ruzivo rako rweP ProfileIn, kuitira kuti iwe unogona kushandisa makapu mazhinji, pane kuzadza mapeji akawanda.
Izvo zvakanaka, asi hazvisi zvitsva - LinkedIn pachayo yave ichipa icho kwechinguva. Icho chinonzi LinkedIn Job Search app chinodzinga zvose LinkedIn fluff, sekubatanidza nemapoka, nekukusiya nechinhu chisina kunyanya asi chakasimba chekutsvaga basa.
Iwe unogona kutsvaga nehurukuro kana nheyo yekakosha, sarudza nzvimbo, uyewo kuti kure kure neyo nzvimbo yaunenge wakagadzirira kufamba, sarudza kushandiswa kwazvino kwebasa rekushanda kunofanira kuva uye kunyange kutsvaga makambani chaiwo kana iwe uchida.
Iwe unogona kuzadza vakawanda kana sevashomanana pane izvi zvinodiwa sezvamunoda, zvino fungidza mhinduro yekuti inguva ipi ichangobva iyo kana kuti yakakosha sei, uye usati watombonyora pane zvinyorwa iwe uchakwanisa kuona kana zvichiita kuti ushande kuburikidza ne LinkedIn kana kwete.
Kana usati wakagadzirira kushandisa ikozvino iwe unogona kuzvichengetera gare gare, uye iwe unogona kusarudza kuti uwane mazano pafoni yako kana basa rakachengetedzeka rava kuda kupera, kana kana mumwe munhu akatarisa paunoshandisa - saka kana pasina chivimbo iwe uchawana basa, iwe unenge uchiziva kuti sarudzo yako yaonekwa.
Android chete inopa 15 yakasiyana yevheji yevhesi yepamusoro, iyo inowanzoita zvakanaka, asi inogona kutungamirira kumamiriro ezvinhu apo iwe haugoni kuwana zvakakwana izwi raunoda.
Precise Volume, sezvinonzi zita rinoratidzira, rinokupa hutungamiri huzhinji, uye 100 yakawanda yehuwandu yehuwandu yakavakwa mairi. Sehurumende yepachena, iyo ingadai yakangova yakakwana yekukurudzira iyo asi Precise Volume yakazara zvakare izvesa zvishandiso uye zvigadzirwa zvakagadzikana, sezvinodiwa mutauro presets uye kukwanisa kugadzirisa chikamu chepamusoro paunoshandisa headphones, kudzivirira kunzwa kwako.
Dzorera kune pro kune imwe-off ya $ 2.49 / £ 2.49 uye iwe unogona kuwana huwandu hwehuwandu hwehuwandu hwe1,000,000, pamwe nekwanisi yekuti volume ichinje ichishandura kubva purogiramu, bluetooth kana michephone inoshandisa.
Izvo zvinhu zvinobatsira, asi hazvisi zvinokosha, uye kunyange purogiramu yakasununguka ichaita kuti simba rako rive nesimba pane nzira dzaungasangana nadzo zvinoshamisa apo iwe unoshandiswa kuva nehutano hwakanaka.
Kuvimbika kunoratidzika kuwedzera kuoma kuuya nezera re digital, uye mafoni edu ega ndiwo anokonzera izvozvo, sezvatinotumira mameseji, kutarisa uye kunyange kushanda kubva kwavari mumusangano.
Zvisingabvumirwi, pane imwe nguva, mumwe munhu ari kutarisa pamapfudzi ako, saka zviri nani unotarisira kuti hausi kushanda pane chimwe chinhu chakavanzika kana kutumira mavara e-sexy kune mamwe anokosha kana zvichiitika.
Asi kune zvinhu zvaunogona kuita kuti kuderedza mukana wekuti vaone chimwe chinhu chavasingafaniri, uye chimwe chezvinhu izvozvo ndechokuti chishandise ScreenGuard Lite.
Iyi purogiramu ichawedzera purogiramu kana firimu yemuvara pahwindo rako rinoita kuti zvive zvakaoma zvikuru kuita zvinyorwa nemifananidzo kubva kure.
Simba uye ruvara rwehuyu rinogona kushandurwa uye iwe unogona kusarudza kungovhara chikamu chechikanda kana uchida. Iwe unogonawo kukurumidza uye nyore nyore kugadzirisa kana kubvisa firiji uye kuchinja zvirongwa uchishandisa toggles pamumvuri weruzivo, saka haisi yakawanda yekutambudza kuisa uye kushandisa.
Pane zvakasiyana pro version (haisi kuwanikwa seIAP) iyo inowedzera mamwe maitiro ekugadzirisa uye inokubvumira kuisa mapurogiramu akawanda e $ 1.58 / £ 1.26, asi kunze kwekuti iwe uri pakavanda shanduro yekusununguka inofanira kuita zvakanaka.
Kana iwe uchifara kushandisa mari pane podcast player tinogona kutaurira Pocket Casts, asi kana iwe uchida mutambi akakodzera usingakubhadhara mari Podcast Go iyo ndiyo nzira huru.
Vamwe podcast vatambi havana unintuitive kana vakaipa, asi Podcast Go haina. Kunyange zvazvo zvisinganyatsozivikanwi-zvakanyatsogadzirwa, zvine zvigadzirwa zvose zvinokosha zvaungada.
Kutsvaga uye kuwana podcasts zviri nyore kutanga, nepamusoro pe300,000 iripo pari purogiramu, yakarongwa muzvikwata (zvakadai sekuvaraidza kana teknolojia) iyo iwe unogona kufuta kubva pane zvakakurumbira kana kufambira mberi.
Panewo mabheji ekuona chero zvikamu zvitsva kana zvisingagumi zvepodcasts iwe unyoresa, zvichiita kuti zvive nyore kuramba uri pamusoro pavo.
Unogonawo kusarudza mazano ekutsvaga zvikamu zvitsva, kuisa zvikamu zvitsva kuti uite zvekudzivirira, kuvaka sarudzo, nekuisa podcasts kuti urege kutamba mushure mekunge imwe nguva-yakanaka kana, somuenzaniso, iwe unofara kurara kune inzwi rinonamatira iwe unofarira podcaster yako.
Iko kune marudzi ose ezvinyorwa zvekunyora, asi vashomanana vanotarisa dambudziko rekutora iwe kuti utange kunyora pakutanga. Kunyora kuisa pepa pamapepa, kana munwe kune keyboard, inogona kuva dambudziko guru pakuwana chimwe chinhu chakanyorwa, pasinei nokuti icho chinhu chiri nhoroondo yave ichikurira kwemakore kana chidimbu chebasa nekusvika kwekupedzisira.
Writometer inobatsira kukunda dambudziko iri nekukupa zviyeuchidzo zvezuva nezuva kuti uite basa, uye nguva yekukubatsira iwe kuchengeta iwe zvakananga kwenguva yakatarwa iwe paunotanga.
Izvo zvekushandisa inoita kuti iwe uone kufambira mberi kwako uye uise zvinangwa, uchibvumira kuti uise izwi rose kana kuti chinangwa cheunhu, zuva rekupedzisira uye shoko rezuva rega rega-kana kuti ita kuti zvive nyore kuverenga mazwi akawanda aunoda kuita zuva rega rega kuitira kuti urove yako nguva yakatarwa.
Nokufamba kwenguva iwe uchaona matanda uye maratiro ekufambira mberi kwawakaita, uye app ichakupa mubayiro nemagavas echokwadi ekuzadzisa zvinangwa zvezuva nezuva.
Nei ma guavas? Hatina chokwadi. Asi iwe unogona kugadzira yako zvibato zvaunozvipa iwe kana iwe uchiunganidza imwe nhamba - semuenzaniso iwe unogona kusarudza kuti iwe unozotengesa mune imwe guava yekiki, asi kuita izvo kunogona kudzosera hutano hwako zvinangwa ... saka pamwe kusarudza kune mumwe mubayiro.
Kana hupenyu hwako ihwo husingaregereri ruzivo rwemashoko e-smartphone unogona kuda kuziva kuti ndezvipi zvakakodzera kukoshesa kwako usati watora nguva yekutora foni yako, uye Converbration chinangwa chekubatsira nezvo.
Kushandisa ruzha rwekutinhira kana mhere-mhere zvinokupa ruzivo rwezviri mukati memashoko. Semuenzaniso, nguva yakareba mameseji ichave nemayero akawanda, apo mharidzo yakagadzirirwa semubvunzo ichave yakasiyana-siyana pamugumo wekucherechedza.
Uye inopfuurira mberi, uyewo kuchinja notification inonzwika zvichibva kune mazwi makuru kana toni, saka une pfungwa yekuziva kana shoko rakanaka kana rakaipa, rinokurumidza kana rakabatana nemabasa.
Iwe unogonawo kuwedzera mafaira ako, kuitira kuti purogiramu yacho ichatora (kana kusava nehanya) mazwi chaiwo nemitsara, uye iwe unogona kuchinja mhando dzemashandise aunowana, kusarudza kwenguva yakareba kana kupfupika kutenderera maitiro, kana kushandisa manzwi panzvimbo.
Kushandura kunobatanidzawo, kushanda ne SMS, WhatsApp, Kik, Facebook Messenger, Allo, Google Hangouts, Viber, LINE, Telegram, VKontakte, WeChat, BBM, Kakao Talk, Yahoo Messenger, imo, Tango, GroupMe, hike messenger, uye textPlus (nezvimwe zvinouya, kana iwe uchigona kutenda izvozvo).
Tora zvigadziriswa kuti unozvida sei, uye shandiswa kune izvo zvakasiyana siyana zvinonzwika zvakafanana, uye hauzotorizve foni yako kuti uwane mhinduro yekuti 'k' kana 'lol'. Izvo purogiramu yacho yakasununguka, kana iwe unogona kuripa $ 3.99 / £ 3.79 kuti ubvise matangazo.
Iwe unofunga kuti kutora nguva yakakodzera kungava nyore, asi vazhinji vanoita kuti uite kamwe chete panguva imwe chete. Hatizivi pamusoro pako, asi upenyu hwedu hunofadza, hutsva hunowanzoda nguva yakawanda, sezvo tichigadzira nguva yekubika, kushambidza uye kushanda pakati pemamwe mabasa anofadza.
Multi Timer StopWatch inobvumira izvozvo, uye yakazara nezvimwe zvinhu zvakare. Multiple timers inogona kuponeswa uye inogadzirwa nemazita avo uye nguva, iyo inobatsira kana iwe uchishandisa timer imwe yakawanda.
Timer imwe neimwe inokwanisawo kupiwa ruzha rwayo uye iwe unokwanisa kutamisa TimerCeption (timers mukati mekutora), zvinoreva kuti purogiramu ichakuchenjerera mushure mekunge imwe nguva yakapfuura musati wapera nguva.
Kune mahwindo akawandisawo, kuti zvive nyore kupinda nguva, uye kune chivakwa chekusimudza. Uyezve, unogona kubvisa timer chete nekuisa ruoko rwako pamusoro pekrini.
Purogiramu yacho haisi iyo yakanakisisa kupfuura yatakamboona, uye kana iwe uchida kubvisa matanho iwe uchada kubhadhara imwe nguva ye $ 2.99 / £ 2.79 mari, asi iwe wakasununguka unowana imwe yebasa rinoshanda uye inowanikwa-yakazara nguva dzese.
Whisper ndeimwe yezvizhinji zvekushandisa zvinokutendera iwe kuparidzira pfungwa dzako nemanzwiro kunyika. Asi inokubvumira kuti uite izvozvo zvachose musingazivikanwi, nezita remutauro iwe unogona kuchinja kakawanda sezvaunoda uye nehuwandu hwe--huwandu-huine makore ako, hutano uye nzvimbo inosvika.
Izvo zvakawanda zvepurogiramu zvinosanganisira maziso mashomanana, pamwe chete nemufananidzo (kazhinji imwe inoratidzirwa ne-app uye kazhinji yakakurudzira kupfuura yakakosha, kunyange iwe unogona kuisa yako pachako). Iwe unogona kubva kupfurikidza nemishumo, uchitarisa ivo kana kune avo vakatumirwa pedo, avo vari mumapoka iwe ndewavo, vekupedzisira, kana vanozivikanwa zvikuru.
Iwe unogona kupindura kune mharidzo kana iwe uchida, kana kutanga kukurukurirana pachedu nemunyori. Purogiramu yacho yakazara inowanzoita semunhu asingazivikanwi uye anoona ye Twitter, zvisinei pasina mabhizimusi makuru uye zviso zvakakurumbira, uye nekutowedzera kukuru uye kugoverana pakavanzika nekuda kwekusina kuzivikanwa.
Asi nekutarisa kwevanhu vari pedyo nayo kunogonawo kunzwa hukama hwevanhu - kukurudzira vanhu kutaura uye kunyange kusangana.
Izvozvo zvinenge zvichitopesana nezvinodiwa kusingazivikanwi, asi haufaniri kugoverana zvakawanda pane zvaunoda. Kana iwe uchida kuva mweya, kutumira uye kupindura usingatauri chimwe chinhu, icho chiri nyore kusvika.
Kuona kuti ikozvino ikokukurumidza kukurumidza 18.2Mbps dzose zvakanaka uye dzakanaka, asi izvi zvinorevei kune zvekushandiswa kwenyika? Ndiyo mubvunzo unonyanya kukurumidza kuedza mavhisi kusakwanisa kupindura, asi kwete Meteor.
Iri purogiramu haringobvunzeri yako kukurumidza kukurumidza, download kasi uye ping, asiwo inopa mumwe nomumwe nhamba, kubva kune 'varombo' kune 'inotyisa', saka une pfungwa yakanaka yezvinorevei.
Asi Meteor inopfuura kupfuura izvozvo, nokupa chiyero chimwechete kune kusarudzwa kwemapurogiramu, saka kana zvichienzanisa neGoogle Maps kuti 'zvakanaka kwazvo', zvinoreva iwe unogona kutarisira mapepa akanyatsofambisa uye anokurumidzira nemafuta ako epanguva ino.
Uye iwe unogona kuenderera mberi uchiripo, uchibata purogiramu kuti uwane kuparara kwebasa rinogona kunge riri pamabasa akasiyana. MuSpotify, somuenzaniso, unogona kutarisa zviyero zvakasiyana zvekuteerera rwiyo kana kukandira album muzvakanaka, yakakwirira kana yakanyanya kunaka.
Meteor haina kukwana: kusarudzwa kwemapurogiramu iyo inogona kuenzana nekushanda kwayo ikozvino kwakagumira (kufema kwakadzika): YouTube, Spotify, Facebook, Waze, Google Maps, Skype, Amazon, Dropbox, Chrome, Flipboard, Gmail, Instagram , Google Street View, Twitter, Uber uye WhatsApp.
Chiri chakaipa iwe unogona kungosarudza vatanhatu vavo kamwechete. asi zvinodarika zvakanyanya kudarika mavhejeri akawanda ekuedza mazano kuti ubatsire kutsanangura zvauri kutarisa pafoni yako uye ikozvino mafambiro epamusoro, uye ine unyanzvi hwokugadzirisa uye nyore nyore kufamba nechokuitawo zvakare.
Ndiyo musikana wako wekutsvaga wekusarudza kwete kungochichera zvakare? Pyrope Browser inogona kunge yakashandurwa yakasimba, pasinei nokuti uri kutsvaga kukurumidza, kuchengeteka kana zvimwe zvinhu.
Inogona kudzivisa matangazo, kuchengetedza kukurumidza zvakakwirira, uye kana uri kushandisa chigadziri ne Qualcomm Snapdragon chipset Pyrope inokurumidza kunyange, sezvo yakagadziridzwa kune iyo chips - kunyange iyo inofanirwa kushanda zvakanaka kune dzimwe chipsets.
Inokuchengetedza iwe neyo incognito mode, kukwanisa kudzivisa pop-ups uye cookies, uye 'LookLock', iyo inomisa zvimwe zvibvumirano kubva pakuona kana kuverenga zviri mukati chero masayiti aunoona.
Uye kune dzimwe nzvimbo, Pyrope yakazara izere navo. Pane nzira yeusiku ine mavara akachinjwa, simba rekuchengetedza simba, mazhizha akazara emmersive mode, audio background, saka mavhidhiyo anokwanisa kuramba achitamba inzwi kunyange kana musikana wacho asati ari mberi, kukwanisa kuchengeta masayiti ekuverengera kusina kubuda, uye gesture controls.
Zvose izvi uye Pyrope Browser inotaridzika shanje zvakare, kunyanya kana iwe ukashandisa 'dynamic notification bar', iyo inoshandura ruvara rwehairi yako yekuzivisa kuti ifanane nemuvara wewebsite uripo.
Isu tinoshandiswa kunakanaka maitiro kunotsvedza kusakwana kwedu kune kazhinji kusinganzwisisi, asi FaceApp zvinonyanya kuchinja iwe selfies, zvichiita kuti uwedzere kumwemwemwerera kunononoka, kuchiita kuti utarise vaduku kana vakuru, kuchinja hutano hwako, kukugadzirisa kana kukubvumira kuti uite collagoni nemifananidzo ina yakasiyana yakashandurwa.
Zviri pachena kuti zvinhu izvi zvinonzwa zvakanyanya sezvipfeko kupfuura zvinofanira-zvine zvigadziro, asi zvakange zvakaoma kana zvakatanga kuIOS uye hazvina kuoma kuona chikonzero. Nokudzikamisa kune zvishoma zvingagadzirisa, uye uchishandisa mitambo ye-neural yekusimudza kunorema, FaceApp inoshanda zvakanaka, pamwe nekunyemwerera kwakawedzerwa kunyanya kuve kwakanyanyisa kugutsikana pane dzimwe nguva.
Inoshandawo pamwe chete nemifananidzo iripo mune yako gallery kana zvitsva zvaunokwanisa kubva kune app, kunyange zvingave zvishoma nezvishoma pakukanda mapfupa matsva, uye kuedza kuwana zviso mumifananidzo yakatorwa kunze kwe app, saka ichi chinhu chimwe chete iyo inoda kushanda.
Kunyange zvakadaro, kana iwe uri rudzi rwomunhu anogara kuSecapchat filters FaceApp inofanirwa kutarisa, kana iwe uchida tweak inotendwa kana kuchinja kunoshamisa.
Iwe haugone kuva nemimhanzi yakawandisa muupenyu hwako, kunze kwekuti mimhanzi ichikuvadza, iyo 80% yaro zvichida ndeyekuti iwe uri kuvimba nenyota inofadza iyo redhiyo yekuwana zvinhu zvitsva.
Kunyangwe nziyo dzakakurudzirwa paSpotify uye zvakadaro zvinogona kuonekwa sechinyatsojeka chezvinhu zvaunoda kuteerera, ndicho chikonzero SoundR Music anoedza kukupa humwe hutongi.
Nepo iwe usingakwanisi kusarudza uye kusarudza nziyo dzakadai se "yakakodzera" maitirwo ebasa, unogona kutora mhando, manzwiro uye basa kana kuronga, zvakadai se'kati 'kana kuti' kurara '. Saka kana iwe uri mumamiriro ezvinhu e chill techno unogona kuteerera muzhizha uchiri kumhanya, unogona kutsvaga izvozvo.
Kunyanya iwe uchichera pasi zvigumisiro zvishomanana zvaunowana zvechokwadi, asiwowo zvakanyanya iwe pachako zvinova.
Chero zvipi zvinowanzoitika zvinouya nenzira yekunyoreswa, panzvimbo peimbi nziyo, uye iwe haugoni kuikanda idzi, asi unogona kuzvitsinhanisa zvachose, pasina mvumo, uye kana ukawana chimwe chinhu chaunoda unogona kuchidawo - kana, sezvo iwe zvichida unowanzoita, kuwedzera kune Spotify / Apple Music playlist.
Pane mitambo yemitambo yakakura paIndaneti, asi haunzwisisi nguva dzose, neGoogle Play kusarudzwa kwezvinyorwa uye zvikamu zvinobatsira, asi dzimwe nguva zvinoita sechinhu chinopisa.
Kana iwe uchida mamwe maitiro akadzingiswa ipapo pane mikana yese yaunoda moyo, iyo inowanzosimbisa mitambo yemasikirwo neongororo, kutanga uye mazano.
Uye izvi zviri mumavhidhiyo mafirimu, kwete mavara, izvo zvinogonawo kunge zvakakosha, nokuti hapana huwandu hwemashoko hunogona kukupa pfungwa yakawanda yemutambo sekungozviona muchiito.
Izvo zvinotsigira Chromecast, saka iwe hausi wekutarisa zviripo pane zvinyorwa zviduku, uye pamwe chete nemavhidhiyo akavakirwa purogiramu iyo inoratidzawo mitozi yakawanda kubva kuYouTube, Twitch uye Mobcrush, iyo iwe unogona kutarisa usina kusiya app.
Maitiro ekugadzirisa mafungiro haatori mari yakawanda, asi kana iwe uine foni yeWorld you unogona kuwana zvakawanda zvakafanana nekushanda pamwe chete ne-app, uye Pacer Pedometer iri pakati pekunakisisa kweboka.
Purogiramu yacho inonyanya kushandiswa pedometer, uye iyo inoshanda zvakajeka - kana kuti, kana kuverenga kwekutanga kusina kururama iwe unogona kugadzirisa kunzwisisika kusvikira vari.
Kungofanana nekuzvitsaurira kwehutano hunomhanya hunoenda nekusingaperi, kunyarara kuverenga matanho ako, kurega kufamba uye maminitsi anoshingaira sezvo iwe unoshanda kune chinangwa chezvisikwa zvako.
Uye pane nzira dzakasiyana-siyana dzaunogona kuzviisa, zvichienderana nekuti iwe unofarira kutora kana kuchengetedza hupenyu hwebheteri zvakare. Izvi zvinonzwisisika imwe nzvimbo umo mutengesi akazvitsaurira ane zvakakosha, sezvo kusimudza kunorema kunoitwa nechigadzirwa kunze kwefoni yako, asi kana iwe uine iyo zvachose pairi pafoni yako uye kuyananidza ne-app, kubvisa hakuzove zvakanyanya kudarika Pacer's.
Sezvo pane zvinetso zvezuva nezuva, Pacer inokuitawo kuti ushande kune zvakakosha kana BMI zvinangwa, uye kana ukabvisa pa $ 3.99 / £ 3.99 nekubhadhara kwemwedzi wega wega unogona kuwana matongerwo emamwe ekubatsira nawo, zvakadai semudzidzisi weAI nekusvika kumapoka, asi nheyo huru inoramba ichinyatsozadza-inowanikwa.
Wakambofarira iwe unogona kudzokazve kutarisa kwetambo yemavhidhiyo yemutambo? Zvakanaka, ne Dotpict iwe unogona, uye iwe hausi kunyange unoda huwandu hwakawanda hwetareji hwekuita kuti uite.
Iyo purogiramu inokupa iwe negridi, kubva kune imwe ye 16 x 16 kusvika 96 x 96, uye iwe unongotora dot kuti uzadze nawo nemuvara, kana tonga peni iri pasi pegridi kuti uchinje marara wauri kushandisa iye zvino.
Iwe unogona kusarudza kubva kune rumwe ruvara rwemavara palettes kana kuumba yako, kuisa mukati kana kunze, kuzadza ruvara nemuvara, uye gadzirisa chiito chako chekupedzisira nemapopu, asi ndeyekuti maitirwo nemaitiro zvinoguma.
Izvi zvinoita kuti zvinhu zvive nyore, sezvinoitwa pixel art inofanira kunge iri, uye inoita kuti zvive nyore kune vanotangisa kupinda mukati uye kuedza, asi pane zvakakwana kuno kuchengeta nyanzvi pixel artists achibatanawo. Uye kana wapedza iwe unogona kutengesa kana kugovera zvisikwa zvako, saka nyika yose (kana kuti ingano yako yose yakagadzikana) inogona kuiona.
Zvizhinji zvekushandisa zvinowedzera kushandisa kwedu smartphone, asi dondo hazvina kuitika mune kuti inokunyengetedza kushandisa foni yako shoma, nekuve nemiti chaiyo inokura apo iwe uchisiya foni yako yoga, uye ufe kana iwe ukatanga kuishandisa zvakare nguva yakati yapfuura.
Somugumisiro unogona kuguma nemasango ane miti yakawanda kana iwe ukagara usina foni, kana masaga akaoma kana iwe usingaiti. Izvozvo zvingave zvisingaiti chikonzero chekugara pane foni yako, asi nekukwikwidzana neshamwari nenyika, zvisingagadziriswi zvakaitwa, pamwe nemari inogona kuwanikwa zvakare uye inoshandiswa kutenga zvitsva zvinogadzirwa nemiti, Forest inobata basa rakanaka rekudzivisa kuregerera yekuvhiringidzika mumutambo.
Uye kudzivisa kushungurudzwa, pane kukunyaradza iwe kubva pa smartphone yako zvachose, ndiyo pfungwa yepurogiramu, kuitira kuti ugone kuisa muti uchikura apo unoda kuwana rimwe basa kana kutarisa firimu.
Iwe unogonawo kusarudza kuchenesa mamwe mapurogiramu, zvinhu zvinokosha zvaunoda kuti upinde hazvisi kuuraya muti wako, uye kana ukashandisa $ 0.99 / 72p pane unenge uri mukati-app unotosvitsa kukwanisa kushandisa mari iwe unowana paunodyara miti chaiyo pasi rose.
Isu tose tinoda-kuita nhepfenyuro kubva panguva nenguva, uye apo nhamba ipi neipi yekuverenga inotora mapurogiramu inogona kuita basa, inowanzotora fiddly kana inokosha.
Ndicho chikonzero, kunyange kana iwe usati uchitishandise pane zvimwe zvekutenga kwevhiki rese, yakatsaurirwa kune-do list app inokosha kuva nayo.
Pakati peizvi, Wunderlist iri pakati pezvakanakisisa. Kunze kwehutano hwekunaka kune zvakawanda zvishoma zvinoita kuti zvive zvakasimba, zvakadai sekuti kana iwe ukangoronga chimwe chinhu kubva pane iyo inonyangarika, panzvimbo yekunyoresa kwako kungovhara zvinhu nezvinhu zvakashata.
Asi zvakasiyana, kusununguka kwaunogona kutarisa nekudzorera kare zvakatorerwa zvinhu paunenge uchida kuita / kutenga / kuita / kuidya zvakare kunorapwa.
Wunderlist inokuita kuti iwe ugadzire zviyeuchidzo zvemazuva ekupedzisira, sarudza mazita ako mazita echifabheti, uzviise mumapepa uye pasi mazita kuti uchengetedze zvinhu zvose zvakarongeka, uye kukupa iwe kuwanika kune mazita ako kubva mugore pane foni yako, kombiyuta kana terebhuti (yakakwana saka iwe usingaiti kurasikirwa nemazita ako paunodonha foni yako mubhatiro).
Kune vakawanda vashandisi, izvi zvinogona kunge zvakawanda, asi Wunderlist inowedzera, zvichikuita kuti ugove nyore kugovera mazita ako neshamwari neshamwari, kuitira kuti iwe ugone kuvaka mapoka pamwechete kana kuparadzanisa basa. Kana zvichidikanwa, unogona kutora mapikicha uye mamwe mafaira pane zvinyorwa zvako.
Asi chinhu chakanakisa nezve Wunderlist ndechekuti zvese izvi zvimwe zvinhu zvinogara zvakabatikana, zvichikusiya uine yakachena, isina-dhayari interface iyo inoita kuti zvive nyore kugadzira uye kupedzisa rondedzero - chinova chinhu chakanyanya kukosha.
NATED haisi purogiramu itsva, asi inogara ichigara uye inogara ichidiwa. Musha kune anopfuura 2,000 TED Talk mavhidhiyo uye zvikamu zveTED Radio Hour podcast, ine zvinyorwa zvinonakidza kubva kune vanofambisa hurukuro pane zvidzidzo zvakasiyana-siyana, nehurukuro dzinobata zvose kubva "pamanzwiro emanzwiro ekugadzira" kune "nyika inotyaira inoita sei. "
Hurukuro dzinowanzopfupi-dzisingatori kupfuura maminitsi e18, kuitira kuti iwe unogona kukodzera imwe mukafu yekofi, uye inokwanisa kugoverwa, kubudiswa kana kutumirwa kuTV neCromecast, zvichienderana nekuda kwaunoda kuvadya.
Zvichida ivo vanogona kungofanirwa kutarisa / teerera kune imwe nguva, saka kana iwe uri kunze uye kana kana wakagara muimba yako yekugara ivo vanogara vachinyorera.
Yese iri purogiramu inongoratidzwa nekunaka kupenya uye mifananidzo yakawanda, pamwe chete nezvishandiso zvekubatsira kuti uwane hurukuro itsva. Unogona kutarisa rumwe rwemashoko akanyorwa, tsvaga nemitauro yakarongeka, kana kungozvinyora izwi rako mubhokisi rekutsvaga.
Uye takataurira here zvose izvi zvakakwana zvachose? Kudai chikoro chakanga chave chichifadza izvi, tinogona kuziva zvakawanda nezvesayenzi uye nhoroondo sezvatinoita pamusoro pefoni.
Foni yako zvichida yakauya ne app calculator, asi isu tinogona kunge tiine chokwadi chekuti Zvose-mu-One Calculator zviri nani. Haisi chete iyo inoshandisa calculator (iyo inoshanduka kune yesayenzi paunobata foni yako mumamiriro ekuma nyika kana kuti shandura kubva kubva kumucheto wakarurama), inewo pamusoro pe 50 specialist calculators uye unit converters.
Izvi zvinofukidza zvose kubva mukugadzirisa kuenzanisa, kuchinja mashizha uye urefu, kushanda kunze kwezvikamu, zvikamu, kuwanda kwehuwandu nezvimwe. Pane kunyange mutengo wekushandura, iyo inoshandura kugovera ikozvino kushandiswa kwemari, uye BMI calculator.
Zvizhinji zvei zvingangodaro musingadi kushandisa, asi nguva inotevera iwe unoda kuverenga kana kutendeuka chero chipi zvacho-mu-One Calculator chichaita kuti mhinduro isati yave yakawanda kudarika zviduku zvishoma.
Photomath, sezvinoratidzwa nezita, anogona kuita masvomho kubva pamifananidzo. Ingotarisa kamera yako pane dambudziko rakanyorwa (iro rinogona kunyorwa kana ruoko-rakanyorwa) uye app ichakupa mhinduro.
Iyo inewo yakagadzirwa-in in calculator, saka iwe unokwanisa kuisa matambudziko mu-app kana iwe uchida, uye chero nzira yaunosarudza iwe uchapiwa nhanho-ne-nhungamiro yekutsvaga kusvika pakufanana kwakafanana nePhotomath, naizvozvo kana iwe hauzive kuti nei X yakaenzana ne4, iyo purogiramu ichakudzidzisa.
Izvo zvinotora izvi kupfuura kungova wakachenjera calculator, uye chaizvoizvo kunoita kuti Photomath ive chidziro chikuru chekudzidzisa zvakare. Mhemberero dzese dzakasununguka, asi kune $ 0.99 / 89p yokubhadhara kwemwedzi mumwe nomumwe kuti uzarure zvimwe zvakadzama uye tsanangudzo yekudzidza.
Cortana haana kumbobvira anyatsokwikwidza kukwikwidza Google Zvino kana Siri, ndatenda muchikamu chekusungirwa Windows - inoshanda system yakaratidza isingafarirwe parunhare.
Asi Cortana ane hunhu izwi-based mubatsiri, uye iwe unogona kuiwana kwete chete pamusoro Windows handsets asiwo Windows makomputa, iOS uye, chokwadika, Android.
Kana iwe uchida imwe chete AI mubatsiri kumativi ose emafaira ako anopa Cortana kumucheto, kunyanya sekuve neCortana pane zvigadzirwa zvakawanda iwe unogona kuita zvinhu zvakadai sekutadza kushevedzwa maziso pa PC yako, kana kukumbira kuti utumire SMS kubva pa PC yako, uchipa iwe unotarisira pamusoro pesefoni kunyange kana iwe usina foni yako.
Zvakarurama zvakaitwawo zvakare. Iwe unogona kutanga kutaurirana nayo nekunyora 'Cortana Mic' purogiramu yekombiyuta pamba peimba yako, uye inogona kuita zvinhu zvakawanda zvakafanana zvinokwikwidza mapikicha zvinogona, kufanana nekuita foni, kutumira maimeri, kupindura mibvunzo uye kutarisa mashoko pamusoro paIndaneti.
Haisi kunyatsobatanidzwa muIndaneti seGoogle Now, saka haugone kuitanga nezwi rezwi somuenzaniso.
Sevhisi yeMicrosoft iyo inomirirawo kushandisa Bing pane Google. Asi mhinduro dzacho dzinowanzobatsira uye dzinobatsira, uye inzwi rayo ndechekuti haisi robotic shoma kupfuura Google Now, saka ndiyo imwe nzira yakasimba.
Kuronga hurongwa kunogona kuva bhizinesi rakaipa, uye ruzivo uye mabhuku anowanzotaridzwa kune mamwe mawebhusayithi nemasevisi, asi Google Trips Chinangwa chekuisa zvinhu zvose munzvimbo imwe.
Tsvaga kutsvaga nzvimbo uye purogiramu ichapa ruzivo pamusoro pezvitsvaga, maresitorendi nezvimwe, izvo zvaunogona kuzvichengetedza kurwendo rwako.
Chero bookings iwe yaunoita - ingave yendege, pekugara kana chero chipi zvacho - inogona kuwedzerwa kubva kuGmail, uye kana iwe uchinetseka kuzadza zuva unogona kushandisa marongero akavakirwa ezuva, izvo zvinoisa panguva yepakati nguva yaunoshandisa nzvimbo uye kuti zvinotora nguva yakareba sei kusvika pakati pavo.
Zvakanakisa zvezvose, zvese zviripo kunze kweintaneti, saka hauzofanira kutakura mutengo wekutenderera nguva dzese kana uchiongorora kufamba kwako.
AccuBattery haisi yakagadzirirwa kutambanudza foni yako pakati--mutengo weupenyu, zvakanyanya sezvo inotarisirwa kurevedza hupenyu huse hwebheteri yako kuitira kuti makore maviri kubva ikozvino zvichiri kugara akatengesa kwenguva yakareba.
Hazviiti izvi nekufungisisa zvinhu shure kwezviitiko, asi kungokupa ruzivo rwaunoda kuti uite zvisarudzo zvakanyatsozivikanwa pamusoro pei uye zvakadini kutengesa foni yako.
Kubhadhara bhateri yako ku100% kunogona kupfupisa mararamiro ayo, uye AccuBattery inopa maonero emigumisiro yekubhadhara zvikamu zvakasiyana, nezvinokurumbira iwe usingawani mari kupfuura 80%.
Kuti ikubatsire kutarisa kuti inewo yakagadzirirwa muvharivha, iyo inopera apo bhatiri inosvika kumwero waunoda, pamwe chete nehuwandu hwehutano hwebheteri, inotitaurira bhati rekare re8-rekare S7 Edge rekare ikozvino kusvika ku 83% hutano, ne 600mAh yakabva pane simba rayo rekutanga.
Izvozvo zvingasave zvakanyatsokwana, asi zvechokwadi ndiyo iyo inhamba ichaita kuti iwe uite chiito.
Uye kunyange kana iwe wakatofungisisa nezvekuti iwe unotengesa sei foni yako, AccuBattery inogona kuva yakakodzera kuva nayo, sezvo inopa ruzivo rwakanyatsorondedzera pamusoro pekuti simba-raine nzara yako mapurogiramu, uye nguva yakareba sei bhati yako ichagara pakati pemhosva, kupfuura Android pachayo inoita .
Kana Planet Earth 2 isingakwanisi Attenborough kwauri iwe uri muhombe, sezvakaitwa neBBC Nhoroondo yeAttenborough yeHupenyu - purogiramu yakanyanyisa iyo inosanganisira chikamu chepamusoro peZ1000 zvinyorwa kubva pane zvinyorwa zvayo.
Izvi zvinogona kuderedzwa pamusoro peDi-Fi kana data yefaira, zvichikupai kushandiswa kusingagumi (uye kwakanyanya) kushamba kwemhuka nemichero, zvakakwana nezvikamu zvitsva zvitsva zvakanyorwa naAttenborough purogiramu.
Iwe unogona kutsvaga zvinyorwa zvayo, firiji nerutivi, kana kungotarisa zvakakwana kusarudzwa. Iwe uchanowanawo 'zvikamu zvakasanganiswa' zvinobatanidza pamwechete kusarudzwa kwezvikamu zvakabatana muvhidhiyo imwe chete yakareba.
Uye kana uri kunzwa uchigadzira iwe unogona kuumba iwe pachako, iwe unogona kutumidza zita uye kugovera pane zvekugarisana.
Kana iwe uri pakuvhima iyo itsva yekutumira app unogona kuita zvakaipa kupfuura Google Allo, ine yakawanda yekutanga uye mashoma mashoma emhando yausingazowanikwe kumwe.
Smart Reply, imwe yeiyo standout maficha aAlo, inopa mhinduro kumashoko uye mapikicha, kudzidza mataurire aunoita nguva nenguva, saka unogona kutumira mhinduro dzechokwadi usati waita typ-kunyangwe ichiita senge chisina kujairika.
Imwe huru huru ndeyeGoogle Assistant, iyo inoshanda zvishoma seyinyorwa yeGoogle Google, asi iyo yaunogona kuisa mune chero hurukuro, uchikumbira mibvunzo kana kuitora kuti ibudise mashoko kubva pawebhu.
Allo zvakare ine incognito mode, ine magumo-ekupedzisira-encryption uye meseji dzinopera, kune chero ani zvake akanyanya kuchengeteka anoziva.
Sezvine chero chinhu chitsva chekutumira mameseji dambudziko rakakura naAllo richange richinyengedza shamwari dzako kuti dzishandise, asi zvakabatsira.
Pane zvakawanda zvepodcast apps kusarudza kubva, asi zvishomanana zvakazara-zvakazara uye zviri nyore kufamba sezvazviri Podcast Player, uye zvishomanana zvakare zviri pachena.
Podcast Player inokubatsira kuti uwane mitsva mitsva nekutevera iwe misoro, iyo inogona kunge yakafara se 'tech' kana seiniche uye yakataridzika se'kuchengeta nyuchi '.
App yacho zvakare izere izere nezvimwe zvinhu zvinobatsira, sekungotorodha-kurodha mahusiku episodhi emitambo iwe unonyoreswa kune chero iwe uri paWi-Fi, uye kugona kwekuenderanaganirana pane zvishandiso, zvese zvakaputirwa mune zvinoratidzika, zviri nyore interface isina zvachose adverts. Podcast Player yakanakawo unoshamisika kuti nei iri mahara.
Une mutengo unodhura weapp? Yasvika nguva yekuti iwe uwane Mazano eMuGoogle, chirongwa chinokupa chikwereti cheGoogle Play nekuzadza nekuongorora nokukurumidza.
Mazhinji emibvunzo yakawanda sarudzo uye pane kashoma kudarika mibvunzo shoma muongororo yega yega, saka iyo app haizotambisa nguva yako.
Iwe unowanzo kuwana kutenderera kweongororo imwe chete pasvondo, saka hazvisi kuzokuita hupfumi, asi iwe unogona kuwana mari yakaringana kutenga App kana kurenda bhaisikopo mwedzi wega kana mbiri, zvese kwemaminitsi mashoma ebasa.
Prisma inoshandura mapikicha ako mumabasa ekugadzira, uye zvino Artisto yasvika pakuita zvakafanana mavhidhiyo.
Ingosarudza chero clip ipi yakachengetwa pafoni yako (kana kupfura imwe yakangonanga kubva kuapp), wozosarudza kubva pane huwandu mafirita, mamwe acho akafuridzirwa neaya chaiwo masitaera, akadai sa sanaa nouveau, uye app ichakurumidza isa iyo firita kune yako tsoka.
Zvichienderana nekapepa uye chimiro chaunosarudza mhedzisiro inogona kubva kubva pakanaka kusvika kune kusanzwisisika kusviba, asi zvinonakidza kutamba nazvo uye, kana zvikashandiswa nekutarisira, zvinogona kutungamira mumavhidhiyo anotaridzika.
Paunenge uchinge washandisa firita iwe unokwanisa kugovera chako chisikwa zvakananga kuWhatsApp, Facebook, kana chero imwe app inoenderana pafoni yako, kana kungoisa kune yako yekubatira.
Kana iwe uri chinhu chakafanana nesu iwe ungangove wakakurumidza kukanganwa zvigadziro zvinonyadzisa zvawaive akapfeka mumafirimu ako ekare akadhindwa.
Mashoko akanaka iwe unogona kuvanza nyore nyore mubhokisi, mukapu kana pasi pegungwa. Mashoko akaipa ndeye PhotoScan neGoogle inovasvitsa munyika yedhijitari, mavanenge vasingazopfuure nekubaya - saka ndapota funga nezveramangwana rako paunenge uchiita mifananidzo yako.
Tevera mirayiridzo iri nyore, iyo inosanganisira kusunungura foni yako pamusoro pechifananidzo, saka lensera yemera inokwanisa kuona zvakajeka zvikamu zvose zvakasiyana, uye inenge isingafadzi mufomu yepamagetsi uye yakagadzirira kugoverana mumasangano ehupfumi.
PhotoScan ine dzimwe nzira dzakachenjera dzakasimudza sleeve yayo zvakare, zvichibvumira kuwedzera mifananidzo, kudzivisa glare, uye mbeu uye kururamisa mitsvuku, kuitira kuti mugumo wapedza chaizvo wakafanana nemufananidzo weku digital, pane kungoita chinyorwa chechidimbu.
Zvose zvinokurumidza uye zvakajeka, izvo zvinosuruvarisa zvinoreva kuti hapana kukanganwa iyo girgy jeans uye makumi mapfumbamwe mutsvuku kana iwe uri gehena-wakagadzirira kunyora yako yose dhidhi yemifananidzo yekare.
Tese tavapo. Iwe wafunga kuti unoda kutarisa ratidziro chaiyo kana firimu uye zvino unofanirwa kuvhima kuburikidza nematanhatu ese mabhiriyoni akasiyana ekufambisa masaiti kuti uone kana kana iripo.
Asi zvakadini kana pane imwe nzira? Ko kana iwe ukangokwanisa kutsvaga kamwe chete uye kudzokera kunzvimbo yezvaunogona kuwanikwa?
Ndizvo JustWatch zvinoita, iwe unongo taurira iyo nyika yauri mairi uye kuti ndeapi mawebhusaiti uye masevhisi aunofarira iwe pawakatanga kurodha iyo app, mushure mezvo ichadzosa zvese zvakakodzera zvekutsvaga kubva ipapo.
Ndicho chikonzero chakakwana kuti rwizi fiends kuibata, kunyanya sezvo iri yemahara, asi pane zvakawanda pano, zvinosanganisira rondedzero dzechangobva kuburitswa pane ako ese akanyorwa masevhisi, saka hauzombopotsa mutsva weNetflix zvakare.
Wakamboda kuunza ako ese ekare maWarhammer zvidimbu kana matoyi evana kuupenyu? Zvakanaka na chitsungo iwe unogona, kana kuti zvimwe kune rumwe rudzi rwekumisa hupenyu hupenyu.
App haikwanisi kureruka: iwe unongonongedza foni yako pane chero chaunoda kuratidza, chengera bhatani guru reyero pachiratidziro, wobva wasimudzira zvishoma chero chinhu chaunoda kuratidza mukufamba. Kubva pane izvo, pinda bhatani zvakare uye uenderere saizvozvo kusvikira wagadzira nyanzvi yako.
Pane imwe nguva mifananidzo iyo iripo iwe unogona kuidzora zvakare, shandura chidimbu chemafisi kana zvichidiwa uye kubvisa chero mifananidzo yawakakanganwa kuti ubudise maoko ako.
Iwe unogona kugara uchidzokera uye unowedzera mamwe mafirati kune projekiti panguva ipi neipi, saka iwe haufanire kuisa parutivi masikati ezuva kuti uite unation yakasimbisa iitwe mune kumwechete. Kana iwe uchinge wapedza iwe unogona kuiisa kune yako foni uye kutumira kune shamwari dzako / vana vako / chero ani zvake achiri kutaura newe mushure mekuona yako shonky mira yekumira.
Iwe haungambove uri Picasso anotevera, asi Prisma iwe unogona kuita kuti mifananidzo yako iite seyakagadzirisa seyakagadzirwa nounyanzvi.
Iyo app yemitambo yakawanda mafirita, akakomberedzwa akatenderedza akanongedza akapenda kana artini uye neipi imwe tap (uye zvishoma kana iyo yekumirira - zvakare iwe unofanirwa kunge uri online) unogona kuisa chero eizvi kune chero emifananidzo yako.
Iko kushomeka kwemapikicha eeficha mapurogiramu asi aya anogadzira zvishoma kupfuura mazhinji uye anotaridzika zvinoratidzika semaitiro ehunyanzvi avanotevedzera.
Kana iwe uchinge waisa hira yako yekusarudza iwe unogona kudzikisa mhedzisiro nechinangwa kana chakakomberedzwa zvakanyanya kure kubva kune iyo source image yekuda kwako, ipapo unogona kuchengetedza uye kugovana zvisikwa zvako nemamwe mashoma tap.
Unhu hwakanaka, hunenge huripo-hwakazara, huri nyore kushandisa muteereri wemutambo ane unyanzvi hwemavara uye pasina mari. Izvozvo zvinogona kunge zvisinganzwisisiki zvakanyanya kuti zvive zvechokwadi, asi nenzira yakati Pi Music Player anonunura pamativi ose.
Kune chimwe chinhu chinoita sechakanaka (kwete kuti iwe ungangopedza nguva yakareba uchizvitarisa kana uchinge watora mamwe matanho kumusoro), asi nearty artwork uye classy interface hauzoze hanya nenguva yaunopedza pamberi it.
Iyo ine zvakare maitiro ausingazowani mune vese vatambi, senge yekurara nguva iyo inodzima mimhanzi mushure menguva yakatarwa uye yekurira mutoni, ichikubvumira kusarudza iyo chaiyo poindi mune rwiyo iwe rwaunoda rwiyo rwekuridza.
Asi Pi Music Player ine zvigadziriro zvakaputirwa zvakanaka zvakare, pamwe neanokodzera, nzira dzakasiyana-siyana dzakasiyana-siyana dzokugadzirisa uye kuona mimhanzi yako, misoro yakawanda uye nyore-kuvaka-nheyo dzekuverenga.
Haungakwanise kunyora hunyanzvi nawo Music Maker Jam, asi kana iwe uchida kutanga mukugadzira mimhanzi chiri nyore, chishandiso chishandiso uye kunyangwe kana iwe uchinge uchingova nyanzvi zvinonakidza kukasira kutenderera na.
Pane zvishoma pane izvozvo pane chimwe chinhu chakaita Caustic 3, asi izvo zvinoreva kuti iwe unogona kudzidza izvo zvekutanga uye nekutanga kugadzira mimhanzi inonyatsonzwika mune imwe nyaya yemaminitsi, nekubatanidza kusvika kumasere masere uye kusunungura uye kuatakura iwo kusvika iwe uchifara.
Kune mashoma mashoma skrini aunofanirwa kunetseka pamusoro pawo uye zvese zvakaradzikwa nenzira isinganzwi yakakwenenzverwa paScreen screen, zvakare pane chipfupi chidzidzo chekuti utange.
Bhendi remasampula rinosanganisirwa mahara, asi unogona kutenga zvekuwedzera kana kutonyora zvako kana uchinyatsonzwa kusika.
ne Call Recorder - ACR mazuva ekuve nepeni uye pepa kuti ape kunyora mashoko anokosha pakati pekufonera kwapera.
Iyo app inorekodha mafoni ako iwe, sezvaunogona kufungidzira kubva kuzita, uye inorekodha mativi ese ekurukurirano, kuti iwe usangove uchiteerera kune dzinoodza mwoyo inzwi rako pachako.
Kana iwe ukagara uchizvitsvaga uchinyararidza peni iwe unokwanisa kuisa iyo kuti itange kurekodha yefoni yega zvoga, asi kana iwe uchida kunge uri mutarari izvo zviri nyore kuitawo, nezvakasiyana mafirita kana sarudzo yekungotanga kurekodha nemaoko.
Wedzera munzvimbo dzakasiyana siyana dzekurekodha mafomu, rutsigiro rwekuchengetedza gore uye chirongwa chiri nyore chekutamba marekodhi, icho chinokutendera kumbomira nekusvetuka uchitenderera kusvika kunzvimbo dzakasiyana-siyana mavari, uye Dana Recorder - ACR mhinduro izere-inoratidzwa. Ingo rangarira kuudza vanhu uri kurekodha kuti vagare zviri pamutemo nezvose izvo.
WhatsApp ndechimwe chezvinhu zvinokosha zvikuru zvese zvaunogona kuisa pane yako Android device, kunyanya kana uine shamwari neshamwari munyika yose.
Pane kushandisa kumusoro kwako SMS kubvumirwa nekutumira mameseji, WhatsApp inoita kuti utumire mameseji pamusoro peinenge chero yeWi-Fi kana nharembozha yekubatanidza. Iwe unogona zvakare kutumira uye kugamuchira mapikicha pasina maseseji kurambidzwa, kutumira mavhidhiyo, kuita mafoni uye kuva nemapoka ekukurukurirana. Zvakanakisa zvezvose, kana iwe uchishandisa Wi-Fi (kana uine isina simu data) hapana izvi zvichakubhadhara chero chinhu.
Evernote iyo inyanzvi yepurogiramu yefoni yako yeIroid inokubvumira stash uye kubvumirana zvose zvinyorwa zvako zvinyorwa, izwi memos uye mafaira efoni yako uye unovawana ivo kuburikidza nekombiyuta yedesktop.
Icho chakanakisa chigadzirwa chekugadzira icho chinokutendera kuti uronge uye utsvake zvinyorwa zvako kuti ugare uine chaunoda pane chako.
Iyo yakabhadharwa premium vhezheni inovhura isina kupinda uye kuchengetedza pascode, asi for free iwe uchiri kuwana yakakura, ficha-yakazara dhigiiti dhukutu iro riri nyore kufamba.
Itai kuti zvibereko zvenyu zviwedzere Pushbullet, iyo inokutendera kuti utarise yako foni dzeAndrew uye mameseji zvakananga pa desktop desktop yako. Zvinoreva kana iwe ukawana mameseji mameseji iwe unogona kuverenga ipapo uye ipapo pasina kutora foni yako muhomwe kana muhomwe.
Iwe unogona zvakare nekukurumidza kutumira mafaira kubva pakombuta yako kune yako foni nekungo bika mashoma, uye kana ukagara uchiona kuti unozvinyorera email kuti ungovhura pane yako smartphone, saka hauzombofaniri kuita izvo zvakare nekuda kwePushbullet's kubatanidza kugovera maficha.
Yakakundwa ndeyako yeGoogle pikicha yemharadziro iyo yakagadzirwa kubva pasi kumusoro kuita kuti tungamira snaps yako ive nyore uye inonakidza sezvinobvira pane yekubata dhizaini Android.
Kunyangwe iyo interface iri yakapusa zvakakwana kuti ushandise neminwe yako chete, pane zvakare kudzika kwakawanda kune iyi App zvakare. Iwe unoshandisa zvishandiso kuti utore uye kukwidziridza mafoto ako kuti aite kuti vataridze zvakanakisa zvavakambove nazvo, pamwe nekutamba uchitenderera nezvinosetsa mafirita izvo zvinokwanisa kushandura mafoto awakatora pane yako smartphone kana piritsi.
Pamwe pane mazana emapurogiramu eshumo, asi Google Photos inomira sezvainokupa kuchengetedzwa kusingagumi kwemifananidzo nemavhidhiyo, zvose nokuda kwekushanda.
Ndicho chikonzero chakakwana kusvetuka pabhodhi, kunyanya sezvo ichi shanda kwete paApploud asi pa iOS uye makomputa zvakare.
Asi nezvishandiso zvakakosha zvekugadzirisa uye kugona kuita collages uye Albums izvi zvinopfuura kungova pikicha uye vhidhiyo chengetedzo, inovavarira kuva yako yekutanga uye yekupedzisira kumira mushure mekutora mufananidzo. Kuti uite izvozvo zvinoda mamwe mashoma mamwe maficha, asi iri munzira yayo.
Kana iwe uri zvakakomba nezve kumhanya kana cycling saka iwe unofanirwa kuve wakadzama nezve Strava. Sezvo zvishandiso zvekusimba kwema-smartphone anoenda ndechimwe chezvakanakisa, zvichitendera kuti iwe uongorore mashandiro ako, isa zvinangwa uye uone mafambiro ezuva nezuva ekugadzirisa.
Kune mabhodhi ehutungamiri uye zvinonetsa kuti zvipe iyo kukwikwidza muganho uye kana iwe usati usina chokwadi chekuti unomhanya kupi kana kutenderera iwe unogona kuwana nzira dzakagadzirwa nevashandisi pane app, kana kugovera yako. Zvese izvo zvinouya pasina muripo, nepo premium vhezheni inowedzera kunyange zvimwe maturusi.
Kunyangwe mu2015 pachine nguva nenzvimbo kwatisingakwanise kuwana internet, asi izvi hazvireve kuti haugone kuverenga mawebhusa, zvakadaro, nekuda kweiyo yakanaka homwe app. Iko inokubvumira kuchengetedza nyaya, nhau dzenyaya, mabhuku ebhulogi, mavhidhiyo nezvimwe zvizhinji, zvichikuita kuti uverenge uye uzvitarise pasina.
Iwe unogona zvakare kusanamisa zvinyorwa zvako zvakachengetedzwa pamudziyo wega wega wawakaisa Pocket paari, zvichikubvumira kuti utore kwaawakasiya uye uenderere mberi nekuverenga. Nekusavhurwa kwemukati iwe unogona kuvaka raibhurari ye zvese zvemukati uye iyo app inotoita kurudziro yezvinhu zvitsva iyo yaunofunga kuti yaungada.
ber iri kuchinja mararamiro atinoita. Iwe unokwanisa kukurumidza uye nyore nyore kukumbira teksi uchishandisa purogiramu uye unotora mumaminetsi. Iwe unogonawo kuenzanisa mitero uye kuwana zvinyorwa, pamwe nekubhadhara neGoogle Wallet, PayPal kana nekuwedzera kadhi rechikwereti kuAber account yakachengeteka.
Basa reUber rinowanikwa munzvimbo dze50, uye iri kukura nekukurumidza. Ipa muyedzo uye hauzomboda kutema teksi iyo yekare yakarongedzwa nzira zvakare. Iyo inokurumidza, yakagadzirira uye yakazara yakawanda-tech kupfuura tekisi dzavakamboita.
Kusvika muguta rine chitsva nguva dzose kunonakidza asi zvinogonawo kunge zvichityisa, kunyanya kana uchida kutenderera uchishandisa kutakura kwevanhu. Citymapper - Bhazi, Tube, Rail iri basa rakanaka rinokuendesa iwe zveruzivo rwemazuva chaiwo pamusoro pekutakura kwevanhu mumaguta kumativi ose enyika.
Iwe unogona kuronga nzira yako nyore nyore uchishandisa nzira dzose dzekutakura, kubva kumabhazi kuenda kune miriwo, uye iwe unogona kuchengetwa kusvika pane zvekare nedhimwe nguva-deta, kusanganisira chero kukanganisa kana kuregererwa. Chimbo chinokosha kune ani zvake anofamba muguta.
Google Maps ingangove iri pafoni yako, asi seyakanakisa yemahara yemepu sarudzo yakatenderedza zvakakodzera kuratidza.
Mafambiro ekufambisa, hupenyu hwekutsvagwa kwemigwagwa, kutungamira-kutungamirirwa kweGPS kufamba, Street View uye zvimwe zvese zvinosanganiswa, zvichiita kuti chinhu ichi chiwedzere kutakura kupfuura kunyange dzakawanda dzakabhadharwa sarudzo. Zvakakosha yakatsanangurwa uye zvakare zvakare, ine ruzivo pamamiriyoni enzvimbo, saka hauzombononoka kana kurasika zvakare.
Kunyangwe iwe uri kuyedza kutsvaga nzira yako kutenderedza kana kungoda kutsvaga kumwe kutsva yekudyira, Google Mepu yakakufukidza.
Zvinogona kunge zvisingafadzi sevamwe vatambi vemavhidhiyo, asi kana iwe uchida purogiramu isina-ine musoro iyo inogona kutamba zvakanyanya mafirimu pasi pezuva, ipapo VLC ye Android iri chirongwa chako.
Yakapedza nguva yakawanda muBeta, asi ikozvino inopa ruzivo rwakasimba, ruzere-ruzivo, rwakakwana nekutsigirwa kwemashoko ehurukuro, multi-track audio, DVD ISOs uye nhepfenyuro yemitambo.
Izvo zvese zvakarongedzwa mune nyore kushandisa mutambi, ane majeti uye maitiro ekudzora. Saka haufanire kunetseka nezvekuita kuti media yako ishande, iwe unongofanirwa kuvhura VLC uye tinya play. App ichaita zvasara.
Dropbox iyo ndiyo inonyanyozivikanwa shanduro yekuvumirana uye kugovana mafaira, mapikicha nemavhidhiyo mukati memajeri ako ose, uye mukurumbira waro kwakagadzirirwa zvakanaka. Chero mafaira aunoponesa kuDropbox yako folda pane imwe yePcs kana madivayiri ako achaonekwa muDropbox app.
Zvakatora nguva kuti Dropbox iuye kuIndaneti, uye mushure mekunge usati watanga kutanga iyi purogiramu iyi zvino inokosha nehuwandu hwezvinhu zvitsva zvinobatsira zvinoita kuti iwe uchengetedze mavhidhiyo nemavhidhiyo kubva pakero yako yakananga kuDropbox. Kunyanya nekukurumidza kugadzirisa zvinyorwa zvako kubva mukati memubhidhiyo uye nyore nyore kugovana navo nevamwe vanhu, kana kungozvichengeta zvakachengetedzwa zvakachengeteka.
IF yaimbozivikanwa senge IFTTT, iyo inomirira "kana izvi izvozvi" uye nekupfupisa zvinopfupikisa zvinoitwa neiyi App. Zviri nyore ethos inokupa iwe yakakura huwandu hwezvisarudzo zvekuita chako Android chishandiso.
Unogona kugadzira mazwi akareruka akadai sekuti "kana paine pikicha yatorwa wobva wawedzera kuDropbox", kana kuti "kana nzvimbo yangu iri pamba, tumira meseji kune mumwe wangu uchiti" ndiri kumba! "" Iyo inogona kugovaniswa newe vamwe IF vashandisi. Iwe unoshamiswa kuti yakawanda sei iwe yaunokwanisa kuita neiyo yakapusa nzvimbo.
Chimwe chezvinhu zvakanakisisa pamusoro peAroid ndechokuti iwe unogadzirisa sei, uye kune zvakawanda zvezvibvumirano kunze uko zvinogona kukubatsira kuti uchinje nzira iyo Android inoratidza uye inotanga mapurogiramu kuti iwirirane nezvamunoda.
Kunze kweizvi Nova Launcher zvine nharo zvakanyanya kunaka, zvichikupa kudzora zvakakwana pane yako skrini yemba. Iwe unogona kushandura mifananidzo, misoro, mavara uye magadzirirwo, kuvanza zvakakwana mapurogiramu iwe ausingashandise, kumisa zvigadziro zvemaoko uye kuwedzera zvinonakidza pamunofamba nefoni yako.
Zvinogona kutinhira asi iwe unogona kushandisa vazhinji kana kuti vashomanana vezvinhu izvi sezvamunoda, saka kana iwe uchida kuchengetedza unyanzvi hwako hweSvondo shock na minimalist Nova Launcher vanogona kuita izvozvo zvakare.
Google Fit chinhu chakanakira chengetedzo yekuchengeta chiitiko chako uye haudi chero humwe hwekuqina huteki iwe unogona kungotakura yako Android foni kwakatenderedza newe. Kana iwe uine Android Wear-inoenderana fitness trackers uye inosakara, ipapo Google Fit inowedzera kuve nani, sezvo inogona kuunganidza data kubva kwavari, ichiratidzira zvese munzvimbo imwechete.
Zvirongwa zvekugadzirisa zvezuva rimwe nerimwe danho rinosvika, makoriro anopiswa, kana nguva kana kureba kwekuita muviri kunogonawo kuiswa kuti ikubatsire kusvika pamwero wehutano iwe unofarira, uye nekuchengeta iwe uchikurudzirwa.
Mepu Yangu Fitnes Workout Trainer chimwe chinhu chikuru chekuchengetedza mabhesi pamubatiro wako wekushanda. Sezvo zita racho rinoratidza kuti rinoshandisa maitiro GPS ekuisa nzvimbo yako ye-smartphone smartphone kuti ugone kuenderera mberi kwako, kukubvumira kuti uone kutarisisa kwehurumende yako yekushanda.
Mhinduro yezwi ichaita kuti urambe uri muchiuno kunyange kana iwe uri mukati mekuita basa, inokupa ruzivo kune yako kasi, nzira yauri kutora, makorori akapiswa uye nezvimwe zvakawanda.
Ita shamwari dzive nechekuita newe uye iwe unokwanisa kuona zviitiko zveumwe neumwe, zvichikubatsira kuti uchengetedzane uye kutora chikamu mumakwikwi ane hushamwari.
Kana iwe unofarira kudzidza mutauro wekune imwe nyika ipapo iva nechokwadi chokuti iwe unotora Duolingo: Dzidza Mitauro Free, sezvo iri imwe yeaya mashoma maapp anokwanisa kuve ese ekudzidzisa uye anonakidza, achiverengera kuti iwe unoramba uchidzoka kuzowanda pamusoro pehunyanzvi hwako mutauro, nekurumwa nemhando, zvidzidzo zvinobatsira uye bvunzo.
Spanish, French, Germany, Portuguese, Italian, Dutch, Irish, Danish, Spanish, neChirungu zvese zvinogona kudzidziswa, ndezvemahara pasina kana kushambadzira kana yakavanzika mubhadharo uye ndiyo imwe yenzira dzakanaka dzaunogona kudzidza mutauro mutsva neAditor yako. mudziyo.
Kana iwe uchida kukurumidza uye nyore kuwana kuti chii chimwe chinhu chinoreva mune mumwe mutauro, saka hapana imwe nzira iri nani kupfuura ne Shandurudzo google. Iwe unogona kushandura pakati pemitauro ye90 uye kunyange kutaurirana zvakasununguka nevatauri vemimwe mitauro uye regai Google iite shanduro.
Chimwe chezvakanakisa ficha inoita kuti iwe ushandise kamera ye yako Android chishandiso kushandura chaiyo-yepasi zvinhu zvakadai sezvikwangwani nemaposita. Ingonongedza, pfura uye dudzira! Couple izvi neGoogle Mepu uye une zvese zvaunoda kuti ufambe nyika.
Kana iwe uchida kuchengeta ako akasiyana-siyana maakaunti uye logins akachengeteka saka zvine musoro kuva nesimba rakasimba, rakasarudzika uye rinogara rakachinjwa password kune yega yega. Asi kunze kwekunge iwe uine yekurangarira yemifananidzo iyo zvakare zvinoreva kuti iwe unenge uchirova iyo password reset bhatani inenge iri 6000 kakawanda pazuva.
Izvo hazvina kunaka uye ndipo panowanikwa password mamaneja, sekunge 1Password, vauye. Izvi zvinokupa database yepaIndaneti yepaswedi dzako dzose uye zvinowanzozadza mukutumira masimi, saka iwe chete password unofanira kuyeuka ndeye ye1Password pachayo.
Kunze ikozvino hauchatombodi kudaro, sezvo iyo app yawedzera chigunwe kutsigirwa pamidziyo inomhanya Android Marshmallow.
1Password yakachengetedzwa yakavharidzirwa, saka logins yako yakachengeteka uye inoshanda muIndaneti, iOS, PC uye Mac. Iko purogiramu yakasununguka asi yakasununguka asi kuti uzarure zvinhu zvose zvaunoda kuti uite kamwechete mu-app kutenga.
Kuverenga macalorie yako inzimbo yemoto yekuderedza uremu, asi zvakati fizi handizvo here? The Calorie Counter - MyFitnessPal purogiramu inoita kuti utarise izvo zvaunodya zviri nyore kupfuura kare. Nhoroondo huru yezvokudya iri pedo kukubatsira kugadzira zvokudya zvako, uye rakanakisisa bhacode scanner inoita kuti zvive nyore kuisa zvokudya zvako zuva rose.
Pamwe pamwe nemakorikori, ruzivo rwezvokudya zvekudya zvakasiyana-siyana uye zvokudya zvekudya zvakasanganiswa zvakanyorwa uye unokwanisa kuisa zvinangwa zvekukubatsira kuti uchengetedze, zvichiita kuti zvive nyore nyore kusarudza clementine pamusoro petiroti bhari.
Endomondo - Kumhanya & Kufamba anozvikwereta seyaiye wega mudzidzisi waungazomboda, uye iko kwakanaka kuita darn chikumbiro. Hazvina mhosva kuti ndeipi mitambo kana kwekusimba chiitiko chaunoita, iyi app ino tarisa kufambira mberi kwako uye inokupa ruzivo nezvekumhanya, kure, kupiswa makalori nezvimwe.
Iwe unogona kuchengeta diary yekudzidzisa kuti uone kufambira mberi kwako uye kugadzirisa zvinangwa zvekushanda uye zvinetso kuti ubatsire kuramba uchikurudzira. Zvimwe zvehupfumi zvinokubvumira kuti iwe ugovere uye unyanane neshamwari dzako.
Kunyange zvazvo Endomondo inoshanda zvakanaka pachayo inogonawo kuenzaniswa kune dzimwe shanduro uye zvipfeko, kuitira kuti ugone kuwana mufananidzo wakakwana wekufambira mberi kwako.
Kuwana nguva muhupenyu hwedu kuti tishandise muviri kungashanda, asi Johnson & Johnson 7 Minute Kudzidzira inogona kukubatsira kuti uwane maitiro akaenzana mukati mezvinyorwa zvakanyanyisa zvezvirongwa.
Iyo yepamutemo app yezvesayenzi yakatsikisirwa muviri-kuremerwa Workout yakagadzirirwa ese mazinga ekugwinya uye iine inopfuura ye30 mamineti emavhidhiyo akakosha ekukubatsira iwe kuti ugone kukodzera nemaitiro manomwe eminiti maitiro anongoda madziro, chigaro uye zvishoma zvepasi nzvimbo. Saka kwete chete iwe unoda iwe nguva shoma kwazvo, asi zvakare idiki diki kana zvishandiso. Pachivande tinovenga iyi App, sezvo yakaurayiwa kazhinji mabanza edu ekuva simbe.
Enzanisa mamiriyoni ehurumende kubva kune dzimwe ndege dziri pasi rose ne Skyscanner purogiramu uye uzvibatanise chaiyo.
Mumasekondi mashoma iwe unozokwanisa kutsvaga uye kuenzanisa ndege kuti uwane iyo yakachipa inowanikwa, kana tarisa madhiri akanakisa pane chaiwo ndege kana makabati makirasi.
Iwe unogona kubhuka ndege yako yakasarudzwa zvakananga kubva kuapp uchiri munzira kuenda. Iwe unogona zvakare kutsvaga kwekuenda kune imwe nzvimbo kuti akupe kukurudzira kune yako inotevera yezororo.
Nemamirioni emavhidhiyo ane hushamwari hwevana, YouTube ine mukana wekuva nzvimbo yekutamba ye digital yevana, dambudziko riripo zvakare rine zvakawanda zvisina kukodzera zvemukati. Ndipo pacho YouTube Kids inopinda, inonongedza zvinyorwa zvisingabatsiri uye nekupa zviri nyore, zvinyararire zvinoshandiswa nemwana wako anogona nyore nyore kufamba.
Yakapusa uye yakapukutwa, izvo hazvishamisi kuuya Google. Hazvisi zvese zvekungovaraidza chete, nekuti pane chikamu che 'Kudzidza' zvakare, uye pane zvigadziriso zvevabereki, zvichikubvumidza iwe kuti uwedzere nguva kana kuvharidzira zvimwe zvirimo.
Kuve otomatiki pane mukana zvimwe zvinhu zvisina kukodzera zvicharamba zvichitsvedza, asi kana ukabvisa sarudzo yekutsvaga kubva kumwana wako ichaganhurwa kune izvo zvirevo zveapp. Izvi zvichiri kuvapa iyo yakawanda yekutarisa, apo ichinyatsovacheka kubva pasirese yenyika yeYouTube.
Uyu akapayona pfungwa yeimwe nzira keyboard, ne SwiftKey yekutanga yekupa ku'dzidza 'yako yekunyora maitiro uye kuedza kufanotaura izwi rako rinotevera. Tariro iripo yekuti, nekudzidzira, inozoziva zvirevo zvipi zvaunowanzo shandisa uye zvinogona kukusevha mukupokana mukutumira meseji iri nyore kushamwari.
Kurwisana kwakakwira asi SwiftKey achiri chigaro, ane chirevo chakanaka uye nhamba yakawanda yekugadzirisa maitiro.
Iwe waimbofanirwa kubhadhara kune iyo app, asi ikozvino haufanire kushandisa senti kuti upe khibhodi yako kuti ikure.
Filed Under: how to fix dead keyboard key